October 2010 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
“ကိုယ်သေရင် မငိုနဲ့ ပါးစိုရုံ ရှိမှာပေါ့…” အစချီတဲ့ ဆရာမိုးဟိန်း (သား ဂျာနယ်ကျော်)ရဲ့ “မှာပါရစေ၊ ပြောပါရစေ” ကဗျာလေးကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၂၀ ရက်ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃ အမှတ် ၂၁ မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲတုန်းကတော့ အမှတ်တမဲ့ပါပဲ။ ကဗျာလေး ကောင်းတယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။
ဆရာမိုးဟိန်းကို လူချင်းတစ်ခါသာ ဆုံဖူးပါတယ်။ ဆုံတယ်ဆိုတာလည်း သူက စင်ပေါ်က ကိုယ်က စင်အောက်က၊ သူပြောတာ နားထောင်၊ လက်ခုပ်တီးခဲ့တဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့သာ ဆုံဖူးတာပါ။ စကားတောင်မှ မပြောခဲ့ဖူးပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့ကဗျာတွေနဲ့တော့ ရင်းနှီးနေတယ်။ မြန်မာထဲက ရှားရှားပါးပါး အင်္ဂလိပ်လို ကဗျာ အရေး ကောင်းတဲ့ ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် စိတ်ထဲမှာ စွဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဆရာမိုးဟိန်းနဲ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့တာက ဆရာ့ဖခင်ကြီး ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ် မောင်ရဲ့ အကြောင်းကို ဆရာ့မိခင် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးက ရေးထားတဲ့ “သူလိုလူ”စာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာမ၊ စာရေးဆရာမ မသိင်္ဂီကို ဆရာမိုးဟိန်းက ဂုဏ်ပြုတဲ့ ပွဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဆရာမ မသိင်္ဂီက မောင်နှမ ရင်းချာပမာ ရင်းနှီး ခင်မင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် ရှိပါပြီ။ အဲတော့ ဆရာမက ဖိတ်လို့ အဲဒီ့ပွဲကို တက်ခွင့်ရခဲ့ရာက ဆရာမိုးဟိန်းကို မြင်ဖူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဆရာမိုးဟိန်းကွယ်လွန်တော့ ဆရာမက ဆရာ့အိမ်က ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဆီ သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ဇနီးကို အဖော်ခေါ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဇနီး ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီ့ကဗျာစာရွက်လေး ပါလာတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာလည်း လူတော်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားတာကို သတိထားမိနေတဲ့ စိတ်အခံက ရှိနှင့်နေတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ အဲဒီ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်လိုက်တော့ ရင်ထဲကို ထိသွားပါတယ်။
အဲဒီ့ကဗျာထဲမှာ သိပ်ကြည်ညိုဖို့ ကောင်းတဲ့ ပါဒလေးတစ်ခု ပါတယ်။ “သပိတ် မသွတ်နဲ့၊ လွတ်ပြီးသား၊ ကျွတ်ပြီးသား”တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲဒီ့စကားကို ပြောနိုင်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်လှပါတယ်။ သပိတ်သွပ်တယ်၊ အမျှအတမ်း ဝေတယ်ဆိုတာ သွားလေသူအနေနဲ့ ရောက်ရာ ဘုံဘဝကနေ သာဓုခေါ်ပြီး ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်အောင် လုပ်ကြရတာပါ။ ဆရာမိုးဟိန်းက သပိတ်မသွတ်နဲ့လို့ “မှာသွားတယ်၊ ပြောသွားပါတယ်။”
အခု ဆရာမိုးဟိန်းရဲ့ ကဗျာထဲက “သပိတ်မသွတ်နဲ့ လွတ်ပြီးသား၊ ကျွတ်ပြီးသား”ဆိုတာက တကယ်တော့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အဆုံးအမထဲမှာ ပါဖူးပါတယ်။ သပိတ်သွတ်တာရဲ့ အနက်ကို ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ဟောကြားတော်မူခဲ့ဖူးတယ်။
ဆရာမိုးဟိန်းက သည်စကားကို အလုပ်နဲ့ သက်သေပြခဲ့ဖူးတဲ့သာဓက သေးသေးလေးတစ်ခုကို အဲဒီ့ကဗျာစာရွက်လေး ကျွန်တော့်လက်ထဲ ရောက်လာတဲ့နေ့ကပဲ ကျွန်တော် ကြားလိုက်ရပြီး ကြည်နူးစွာ သာဓု ခေါ်ခဲ့မိရပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ စကားလေးက ပုဂ္ဂလိက စကားလေးပေမယ့် အများသိသင့်တာမို့ ဖွင့်ချပါရစေ။
ဆရာကွယ်လွန်ပြီးနောက် ဆရာ့အိမ်ကို ဆရာမ မသိင်္ဂီ ရောက်သွားချိန်မှာ ဆရာ့သား ဦးမိုးသန့်က ဆရာမကို ပြန်ပြောပြလိုက်တဲ့ စကားလေးပါပဲ။ တကယ်တော့ ဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရေးခဲ့တဲ့ “သူလိုလူ”ကို ဆရာမိုးဟိန်းကိုယ်တိုင်က အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဆိုနေခဲ့တယ်လို့ အဲတော့ကျမှ သိရပါတယ်။ ဆရာမိုးဟိန်း ပြန်ဆိုလို့ ခရီးတော်တော် ရောက်နေချိန်မှာ ဆရာမ မသိင်္ဂီကလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ပြန်ဆိုနေမှန်း ဆရာ မိုးဟိန်းက တစ်ဆင့်စကားနဲ့ ကြားသိသွားပါတယ်။ သည်အခါမှာ ဆရာမိုးဟိန်းက “ဒါဆိုလည်း ပြန်ပါစေလေ”ဆိုပြီး သူ ပြန်ဆိုနေတာကို ရပ်ထားလိုက်ခဲ့ပါသတဲ့။
ဆရာမ မသိင်္ဂီက အဲဒီ့အကြောင်းကို အဲဒီ့နေ့ကမှ သိရပြီး အတော့်ကို မချိတင်ကဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ သဘောထားကြီးလှ၊ မြင့်မြတ်လှတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ နှလုံးသားကို ကြည်ညိုမဆုံးအောင်လည်း ဖြစ်သွားရပါသတဲ့။ ဆရာမ မသိင်္ဂီက ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက်ပြန်ပြောတဲ့ စကားလေးပါ။
ဆရာမိုးဟိန်းက “အိုးမခွဲနဲ့၊ ဘာကိုမှ ကိုယ်မစွဲဘူး”တဲ့။ ဟုတ်တာပေါ့။ ဒါ ငါ့အမေ ရေးတဲ့စာ၊ ငါ့အဖေအကြောင်း၊ ငါလည်း အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကောင်း တတ်တာပဲ၊ ငါပဲ ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတဲ့ “ငါ”အစွဲတွေ မရှိလို့သာ သူတစ်ပါး ပြန်ဆိုနေမှန်း သိတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် ပြန်ဆိုနေတာ ခရီးပေါက်နေလျက်နဲ့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်လိုက်တော့ သူ့မှာ တအား ပေါ့သွားတယ်။ လွတ်လပ်သွားတယ်။ အစွဲကင်းသွားတယ်။ သည်အခါမှာ ဆရာ့အတွက် အိုးခွဲစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ သပိတ်လည်း သွတ်စရာ ဘယ်လိုပါတော့မလဲ။ ဆရာ ကျွတ်နေ လွတ်နေတာ သိပ် သေချာနေပြီပေါ့။
ဆရာမိုးဟိန်းက သွားလေသူ၊ ကျွန်တော်တို့က ကျန်ရစ်သူ။
ဆရာမိုးဟိန်းက ကျွန်တော်တို့ကို “မှာသွားတယ်၊ ပြောသွားတယ်။” ဆရာ့ကဗျာလေးက ကျွန်တော်တို့ကို စကားတွေ အများကြီး ပြောသွားတယ်။ သာမန် ကြည့်ရင်တော့ ဒါဟာ သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာ့ရဲ့ သဘောထား ကြေညာချက်ပဲ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ကို ဆရာမိုးဟိန်းက စိန်ခေါ်သွားတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ကဖြင့် ခံစားနေမိတယ်။
“မင်းတို့ ငါ့လို သေရဲသလား၊ ငါ့လို သပိတ်မသွတ်နဲ့လို့ ပြောရဲလား၊ ငါ့လို ဘာမှ မစွဲဘူးလို့ ပြောပြီး သေရဲလား။ ငါ့လို လူသာ ဆုံးတာ၊ ကျန်တာ မရှုံးဘူးလို့ ကြေညာရဲလား”လို့ ဆရာမိုးဟိန်းက ဖွင့်မေးမသွားပေမယ့် မေးနေဘိသယောင် ကျွန်တော် ခံစားမိတယ်။
ဆရာမိုးဟိန်း ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းမနေတော့ပါဘူး။ သေချာတယ်။ ဆရာ့အတွက် ကျွန်တော် ဆုတောင်းစရာ မလိုအောင် ဆရာ့ဘက်က ပြည့်စုံတယ်။
ဆုတောင်းရမှာက ကျွန်တော့်အတွက် ကျွန်တော် ဆုတောင်းရမှာ။ ဆရာ့လို “မရဏမင်းဆီကို ပျော်ပျော်သွား”နိုင်ဖို့ ကျွန်တော့်ဘာသာ အားထုတ်ရတော့မှာ။ “သပိတ်မသွတ်နဲ့”လို့ မိသားစုကို မှာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ကျင့်ကြံ ပြုမူ နေထိုင်ရတော့မှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမိုးဟိန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို လမ်းပြသွားခဲ့ပါပြီ။
(ယနေ့ ၂၈-၁၀-၁၀ ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ် အတွဲ ၃ အမှတ် ၃၁ မှာ ဖော်ပြထားတာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။ ဆရာမိုးဟိန်းရဲ့ “မှာပါရစေ ပြောပါရစေ”ကဗျာကို ပြန်ဖတ်ချင်ရင် အခု စာတန်းထဲက ခေါင်းစဉ်လေးကို မြားပြပြီး ကြွက်ကလေးရဲ့ ဘယ်ဘက်ပခုံးကို ဖိလိုက်ရင် ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။)
Author lettwebawPosted on 28 October 2010 28 October 2010 Categories Reproduction, Thoughts2 Comments on Ode to Death
A Seasonal Piece
၀ါလ ကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ပြန်ပါပြီ။ မြန်မာတို့ရဲ့ ထုံးဓလေ့မှာ သီတင်းကျွတ် အခါသမယကျတော့မှ စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်မင်္ဂလာတွေ ကျင်းပလေ့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သည်အတွက် Yangon City FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်က တမြန်မနှစ်က သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ မင်္ဂလာမောင်နှံများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းကာ အသံလွှင့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါလေးကို အခု သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ အမှတ်တရ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။ နားဆင်တော်မူကြည့်နိုင်ကြကြောင်းပါ။
Author lettwebawPosted on 24 October 2010 Categories Uncategorized3 Comments on A Seasonal Piece
Facebook ကို သုံးရင်းက Facebook ထဲမှာ လူငယ်တွေ အတော်များများရှိနေကြတယ်၊ ရှိနေကြတဲ့ လူငယ်တွေကလည်း အင်္ဂလိပ်စာတွေကို အဆင်ပြေသလို သုံးနေကြတာကို သတိထားမိလာတဲ့အခါ သူတို့တွေအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်စိတ် ပေါက်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ကျွန်တော်လည်း တစ်နေ့ကို အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ တစ်လုံးဖြစ်စေ၊ စကားစု တစ်စုဖြစ်စေ တင်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် တစ်နည်းနည်း အကျိုးရှိလောက်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စတင် တင်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါတွေကို တစ်လပြည့်တဲ့အခါ ပြန်စုပြီး Note အဖြစ် ပြန်ထုတ်ပေးမိရင်းက မဂ္ဂဇင်းမှာပါ စုစည်း ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်ကို လက်လှမ်းမမီကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်ကောင်း ၀င်နိုင်မယ်လို့ တွေးမိရပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ Beauty M@x မဂ္ဂဇင်းမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလက စပြီး လစဉ် ဖော်ပြပေးနေပါပြီ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ၊ ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်) ပရိသတ်တချို့ကလည်း Facebook မသုံးကြတာမို့ အဲဒီ့ ပရိသတ်တွေလည်း ဖတ်ရအောင်၊ မှတ်တမ်းလေးလည်း ဖြစ်နေအောင် ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
by Atta Kyaw on Monday, 26 July 2010 at 23:59
၂၈၀၆၁၀ Everyday က adjective ဖြစ်တာမို့ သူ့နောက်မှာ နာမ်နဲ့ တွဲပြီး သုံးပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ပုံမှန်၊ ပြုမြဲ၊ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်၊ ဘိုလို ordinary, typical, usual ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ပါ။ everyday life (နေ့စဉ်ဘ၀)၊ everyday chores (နေ့စဉ်ဗာဟီယ) အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ Every day က ကျတော့ adverbial phrase ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ နေ့စဉ် မှန်မှန်ကြီး ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ပါ။ regularly ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ FB ကို နေ့စဉ် ၀င်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ့နေ့စဉ်က ၀င်တယ်ဆိုတဲ့ ကြိယာကို အထူးပြုတဲ့ ၀ိသေသနပုဒ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သည်အခါမှာ I log on to FB every day. လို့ ရေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။
၂၉၀၆၁၀ Limp wristed (adj) သာခွေယိုင်၊ မိန်းမလို မိန်းမရနိုင်သော၊ ပျော့ညံ့သော။ သူနဲ့ ကြောင်းတူ သံကွဲ စကားလုံးက effeminate (adj) ဖြစ်ပါတယ်။ limp wristed (effeminate) manner/voice/walk အစရှိသဖြင့် သုံးတာကို တွေ့ရတယ်။
တစ်ယောက်က လက်ကြောမတင်းတာလို့ ပြောတယ်လို့ ထင်ခဲ့သတဲ့။ အဲလိုရော သုံးလို့မရဘူးလားလို့ မေးလာတဲ့အတွက် သည်လို ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ limp-wristed = (1) describesaman who does not behave in the strong and determined way traditionally expected in men (2) (offensive) describesaman who seems, by his manner, to be homosexual လို့ အဘိဓာန်တစ်ခုက ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ နောက် အဘိဓာန်တစ်ခုကတော့ (1) effeminate (2) weak လို့ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ကြော မတင်းဘူး ဆိုတာထက် ပျော့ညံ့တာ၊ ကနွဲ့ကလျနိုင်တာနဲ့သာ သုံးကြပါတယ်။ လက်ကြော မတင်းတာ၊ တော်ရိလျော်ရိနိုင်တာ၊ လပေါ်သရေနိုင်တာကို lackadaisical (adj) လို့ သုံးရမယ် ထင်ပါတယ်။
သည်နေ့ပဲ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က သူ့နာမည်ကို FB က sexy လို့ သတ်မှတ်တဲ့အတွက် “အကျိုးနည်း”လို့ မှတ်ချက်ချထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ဆီမှာ အောက်ပါအတိုင်း comment ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။
Sexy ကို လိင်ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့ မစဉ်းစားစေချင်ပါ။ မြန်မာလိုဆိုရင် “ညှို့ဓာတ်ရှိတဲ့၊ ညှို့ဓာတ်ပါတဲ့” ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ အကောင်းဘက်ကလည်း သုံးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ “အနက်ပွားက အလွန် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော”ဆိုတာဖြစ်တယ်။ It describes something that attractsalot of interest and attention. နမူနာ ၀ါကျ For most people, grammar isn’tavery sexy subject. ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် sexy ဟာ မကောင်းတဲ့ သဘော မဆောင်ပါဘူး။ ၃၀၀၆၁၀ မနေ့က limp-wristed ဟာ လက်ကြောမတင်းတာပါ မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးလာတော့ ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲ မပေါ်တာနဲ့ lackadaisical ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်က လက်ကြောမတင်းသူ၊ လူပျင်းက layabout (n) ပါ။ အလကား အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့သူ၊ လတ်လျား လတ်လျား လုပ်နေသူဆိုရင်တော့ loafer (n) လို့ ပြောပါတယ်။ နမူနာ – When I was in my late teens, everybody thought that I was an idle loafer but in fact I had never beenalayabout.
တစ်ယောက်က သည်ဝေါဟာရတွေနဲ့ လူပေါ်ကြော့ကို သုံးရင်ရော မရဘူးလားလို့ မေးလာပြန်တာမို့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြေရပြန်ပါတယ်။
ပေါ်ကြော့နေဖို့အတွက်က ပိုက်ဆံလေးလည်း ရှိမှဖြစ်မယ်ခင်ဗျ။ လက်ကြော မတင်းတာ၊ လတ်လျားလတ်လျား လုပ်နေတာကျတော့ ပိုက်ဆံမရှိဘဲလည်း အပျင်းထူလို့ရတာမျိုးကိုး။ ဒါ့ကြောင့် ပေါ်ကြော့ကိုတော့ playboy လို့ ပြောကြပါတယ်။ မိန်းကလေးပေါ်ကြော့ကျတော့ playgirl လို့ သုံးကြတယ်။ ကံအားလျော်စွာ မြန်မာစာအဖွဲ့ထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်မှာလည်း playboy ကို “ပေါ်ကြော့၊ လူချမ်းသာ”လို့ ဖွင့်ဆိုထားတာ တွေ့ရကြောင်းပါ ခင်ဗျား။ သို့သော် နောက်အဘိဓာန်တစ်ခုမှာတော့ ချမ်းသာတာကို သိပ်ဇောင်းမပေးဘဲ ဘ၀မှာ သာယာမှုကလွဲရင် ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူလို့ဆိုထားတာမို့ ပေါ်ကြော့ သက်သက်အတွက်လည်း playboy/playgirl က အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၀၂၀၇၁၀ ရွှေအတော်များများက used to ကို မှားယွင်းသုံးစွဲတတ်ကြတယ်။ တကယ်က used to ဟာ အခု မလုပ်တော့တဲ့အတိတ်တုန်းက လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကျင့်ကို ပြောတာပါ။ အောက်မှာ နမူနာ ၀ါကျတွေ ပြပေးထားပါတယ်။ ရွှေတွေပြောချင်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်နေ၊ ကျင့်သားရနေ၊ ယဉ်ပါးနေပြီဆိုရင် be used to (am/is/are/was/were/been used to + V-ing) နဲ့ သုံးရပါမယ်။
I used to live in Mandalay. (ကျွန်တော် မန္တလေးမှာ နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု မနေတော့ပါဘူး။) She used to love cats but one attacked her and she doesn’t like them anymore. (အရင်ကတော့ သူ ကြောင်ချစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောင်တစ်ကောင် သူ့ကို ကိုက်လိုက်ပြီးကတည်းက သူ ကြောင်ဆို မချစ်တော့ဘူး။) ဒါတွေက အရင်က လုပ်ခဲ့ဖူး၊ လုပ်နေကျတဲ့ သဘောကို ပြောတဲ့ used to သက်သက်အတွက် နမူနာ ၀ါကျများပါ။
We’re used to tourists here – we get thousands every year. (ကျုပ်တို့ ဆီကို ခရီးသွားတွေ နှစ်စဉ် ထောင်နဲ့ချီပြီး လာနေကျမို့ ခရီးသွားဆိုရင် ကျုပ်တို့ အဖို့ ရိုးနေပါပြီ။) Eventually you’ll become used to getting up at 4:00 am. (မနက် လေးနာရီ ထရတာကို မင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျင့်သား ရသွားမှာပါကွာ)။ ဒါတွေကကျတော့ အခု လတ်တလော ကျင့်သားရနေတာ၊ ရိုးနေတာ၊ အကျင့်ဖြစ်နေတာကို ပြောတာပါ။
သည် နှစ်ခု မတူတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အဲ… used to ချည်းသက်သက်ဆိုရင် infinitive verb (V1) နဲ့ တွဲပါတယ်။ am/is/are/was/were/been/get/become used to ဆိုရင်တော့ နာမ် သို့မဟုတ် နာမ်အတုဖြစ်တဲ့ gerund (V-ing) နဲ့ တွဲတာကိုလည်း မမေ့ကြပါနဲ့ ခင်ဗျား။
use to ဆိုတဲ့ အသုံးက used to (အတိတ်ကာလ) အတွက် negative sentences နဲ့ questions တွေမှာသာ ရှိပါတယ်။ Did he use to beamedical practitioner before he becameamonk? (ဘုန်းကြီး မ၀တ်ခင်တုန်းက သူ ဆေးဆရာ အလုပ် လုပ်စားခဲ့ဖူးတယ် မဟုတ်လား)ဆိုတာမျိုး၊ We didn’t use to watch much television in the 80’s… See more. (၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတုန်းက ကျုပ်တို့ ရုပ်သံ သိပ်အများကြီး ကြည့်လေ့မရှိခဲ့ကြဘူးဗျ) ဆိုတာမျိုးမှာသာ သုံးပါတယ်။ ရှင်းအောင် ပြောရင် use to ဆိုတဲ့ အသုံးက Present Tense မှာ လုံးလုံးကို မရှိပါ။
“အသုံးပြုတယ်”ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ သုံးတဲ့အခါမှာတော့ to နဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ Please use scissors to cut the envelopes open. (စာအိတ်ဖောက်တဲ့အခါ ကတ်ကြေးကို တဆိတ် သုံးပေးပါ။)ဆိုတာမျိုးမှာပေါ့။ ဒါတောင် to ဖြုတ်ပြီး for ခံကာ V-ing နဲ့ သုံးလို့ ရသေးတယ်။ Please use scissors for cutting the envelopes open.
050710 အင်္ဂလိပ်စကားကို ရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့ လှအောင် သုံးချင်ရင် ကြိယာလုံးတွဲတွေ (phrasal verbs) များများ သိထားတာက တော်တော် အသုံးတည့်ပါတယ်။ ဥပမာ blow ဆိုတာကိုပဲ လေမှုတ်တယ်၊ ဖျက်ဆီးတယ်၊ မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြုန်းတီးပစ်တယ်ဆိုတဲ့ အနက်များအပြင် နောက်က ၀ိဘတ်တွေ (prepositions) အမျိုးမျိုးတွဲပြီး တခြားအဓိပ္ပာယ်ပေါင်းစုံနဲ့ သုံးလို့ ရနေပြန်တယ်။
The wind was blowing harder every minute.
The letter blew away and I had to run after it.
I blew the dust off the books.
She wished you wouldn’t blew smoke in her face.
He scored the winning goal just before the whistle blew.
ဒါတွေက လေတိုက်တာ၊ လေမှုတ်တာဆိုတာကို သုံးပုံပါ။ သည်မှာလည်း ၀ိဘတ်တွေက ပါနေပါသေးတယ်။ blow away, blow something off, blow something in, စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနက် မပြောင်းသေးပါဘူး။ သည်အနက်နဲ့ပဲ blow your nose (နှပ်ညှစ်တာ) ကို သုံးသလို blow somebodyakiss [မြန်မာတွေပြောတဲ့ ဖလိုင်းခစ်(စ်) ပေးတာ] ကိုလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲလို ပေးတဲ့အခါ ကိုယ့်လက်ဝါးပေါ်ကို ကိုယ့်ဘာသာ အနမ်းခြွေ၊ ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်အနမ်းပေးချင်တဲ့သူဘက်ကို လက်ဖျားလေးတွေ ဦးတည်ကာ လက်ဖြန့်ပြီး လက်ဝါးပေါ်မှာ တင်ကျန်နေဆဲလို့ ယူဆရတဲ့ ကိုယ့်အနမ်းကို ဖူးဆိုမှုတ်ပြီး ပို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် blow somebodyakiss (blowakiss to/at somebody) လို့ သုံးတာပါပဲ။
၀၈၀၇၁၀ blow somebody away လို့ ပြောရင် စိတ်အထာကျသွားစေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အံ့သြသွားစေတယ်၊ အငိုက်မိသွားစေတယ် ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ The ending of the story has blown my spouse away.(ဇာတ်သိမ်းက ကျုပ်အိမ်ထောင်ဖက်ကို အငိုက်မိသွားစေပါတယ်) ဆိုတာမျိုးပေါ့။
နှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ရော သုံးသလားလို့ တစ်ယောက်က မေးလာတော့ ရှိပါသဗျာလို့ ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အားကစားပြိုင်ပွဲမျိုးအတွက်သာ သုံးပါတယ်။ သူကျတော့ blow somebody/something away လို့ သုံးပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်/တစ်ခုခုကို အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ပါ။ The Spain team blew the Germans away in the second half of the match. ဆိုရင် မနေ့က ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအတွက် သုံးလို့ရတာပေါ့။ ဂျာမန်တွေ ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့အောင် စပိန်သင်းက တွယ်ထည့်လိုက်တယ် လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
Tin Mie: Could you pls explain me about the meaning(s) and usages of “whatashame” ??
Atta Kyaw: When they say, “Whatashame?” or “That’sashame,” they express something is in an “unlucky” situation. The following example will clarify if.
“Michael is having to miss the concert because he’s very ill.”
“Oh, whatashame! / that’sashame.”
“Shame on you” is used to tell someone that they should feel sorry for something they did.
e.g. “Shame on you for being so unkind.”
However it can also be used humorously.
e.g. “You mean you were in town and you didn’t come to see us – shame on you.”
မြန်မာလို ပြောရင်တော့ shame ကို အထက်က အသုံးတွေမှာ “အရှက်”ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ပထမ တစ်ခုမှာက “ကံနည်းလိုက်တာ၊ ကံမကောင်းလိုက်တာ” ဆိုတဲ့ အနက်မျိုးနဲ့ သုံးပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက် လုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် နောင်တရသင့်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ သို့သော် အဲဒီ့ Shame on you ကို အဲဒီ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေမယ့် အပျော်အပြက်လည်း ပြောတတ်ကြပါတယ်။ “ညည်း ပြန်ရောက်နေလျက်သားနဲ့ တို့ဆီ လာမလည်ဘူး၊ ဟုတ်လား၊ ညည်း အတော် မိုက်ပါ့အေ…”လို့ ပြောသလိုမျိုပါ။
And one more thing: when you use the verb “explain” it has to be followed byadirect object. In your request, you should say either “Could you please explain the meaning and usages of ‘Whatashame’? (to me)” or “Could you please explain to me the meanings and usages of ‘Whatashame’?”
Remember:explain to somebody something or explain something to somebody. There’s no other preposition to be followed.
The only exception is inaphrasal verb of “explain away,” which is used to avoid blame for something that has happened by making it seem not important or not your fault . (မြန်မာလိုဆိုရင် ဆင်ခြေပေးတာပေါ့။)
e.g. I don’t know how you’re going to explain away that dent you made in dad’s car. (အဖေ့ကားကို ချိုင့်သွားအောင် တိုက်လာတာအတွက် မင်း ဘယ်လိုများ ဆင်ခြေပေးမလဲ မသိဘူးနော်။) Reply: Thank you very much for the answers my dear Saya .. I will takeagreat care in grammars too.. Good to learn from you..
Atta Kyaw: Pleass don’t think about grammar, but learnalanguage with their usages. In Burmese language you say ရေတစ်ခွက် သောက်ချင်တယ်၊ as well as ရေတစ်ခွက်ကို သောက်ချင်တယ်။ Grammatically the latter is correct, but the former very usual and most common.
090710 Please explain to us these phrases, “take it for granted.” and “don’t take it for granted.” and their usages. thanks!
Take somebody/something for granted ဆိုရင် “လွယ်လွယ်ရနေလို့ တန်ဖိုး မထားဘူး၊ သတိမထားမိဘူး”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ In the past I failed to praise my wife: I just took her for granted. (အရင်တုန်းက ကျုပ်မိန်းမကို ချီးကျူးရကောင်းမှန်း မသိခဲ့မိဘူး။ သူ့ကို ပေါ့ပေါ့ပဲ တွေးခဲ့တာ။) In US people take freedom of speech for granted. (အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟခွင့်ကို လူတွေက အလွယ်ရနေကြတော့ တန်ဖိုး မထားကြဘူး။)
အခု မေးလာတဲ့ အနက်နဲ့ကျတော့ မှန်တယ်လို့ မှတ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ I didn’t realise that she hadn’t been abroad – I suppose I just took it for granted. (သူနိုင်ငံခြား မရောက်ဖူးမှန်း ကျုပ် မသိခဲ့ဘူး။ ရောက်ဖူးတယ်လို့ပဲ မှတ်တာ။) I take it for granted that you’ve seen this film. (သည်ကားကို မင်းကြည့်ပြီးပြီ မှတ်တယ်။)
ဆိုတော့ (Don’t) Take it for granted! လို့ ပြောလိုက်ရင် စကားစပ် (စကား အသွားအလာ)ကို ကြည့်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ မသိချင်ယောင် ဆောင်ခိုင်းတာလား၊ ယုံခိုင်းတာလား၊ ပေါ့ပေါ့မတွေးနဲ့လို့ ပြောတာလား၊ မယုံနဲ့လို့ ပြောတာလား ဆိုတာ ရှေ့စကား နောက်စကား အဆက်အစပ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က “ain’t ရဲ့ usage ကို ရှင်းပြပေးပါ။ please..”တဲ့။
ဟောသလို ဖြေလိုက်တယ်။ “ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးစေချင်ပါဘူး။ နဂိုကမှ မတတ်ရတဲ့အထဲ အလွဲကိုပါ ခေါင်းထဲ ထည့်ထားရင် ပိုရှုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ အဓိပ္ပာယ်က am not, is not, are not, has not, or have not ဆိုတာပါပဲ။ ”
100710 Blow away မှာ တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်။ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာကိုလည်း အမေရိကန်တွေက blow somebody away လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးမှ၊ ကြိုချိန်းထားပြီး နီးမှ ကပ်ဖျက်ကာ တစ်ဖက်သားကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တာ၊ လွယ်လွယ်ပြောရင် ကပ်ဖြုတ်တာ၊ ဒေါက်ဖြုတ်တာကိုကျတော့ blow somebody out နဲ့ ပြောပါတယ်။
My girlfriend was supposed to go to that party with me, but she blew me out. (ကျုပ်ဟာမက အစတုန်းကတော့ ကျုပ်နဲ့အတူ အဲဒီ့ပွဲသွားဖို့ပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကို ကပ်ဖြုတ်သွားတယ်ဗျာ။)
လေတိုက်လို့ မီးငြိမ်းတာ၊ မှုတ်ပြီး မီးသတ်တာကိုကျတော့ blow something out ပေါ့။ ဥပမာ… The sudden breeze made the candles blow out. She madeawish before she blew out the birthday candles.
တစ်ယောက်က မေးလာပြန်တယ်။ How about “she blew me off” ? Is it the same as “she blew me out” ? ဆိုလို့ ဖြေပေးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။
မတူပါဘူး။ blow sb/sth off ဆိုလို့ ရှိရင် အလေးမထားဘူး၊ အရေးမပေးဘူး၊ ခေါက်ထားတယ်၊ ချောင်ထိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ အနက်နဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲတော့ She blew me off. ဆိုရင် “သူ ကျုပ်ကို အလေးအနက်မထားဘူး၊ ချောင်ထိုးထားတယ်”ဆိုတာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Just blow off my comments, I’m only joking. (ကျုပ်ပြောတာတွေကို အလေးအနက် မထားစမ်းပါနဲ့ဗျာ၊ နောက်တာပါ)
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ spoon-feeding က ၏သည်မလွဲ အလွတ်ကျက်ပြီး ပြန်ဖြေခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုမျိုးဆိုရင် learning lessons by rote လို့သာ ပြောပါတယ်။ Learning something in order to be able to repeat it from memory, rather than in order to understand it. ပေါ့။ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ထက် သည်၏မလွဲ ပြန်ရွတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တစ်ခုခုကို အသေကျက်မှတ်တာပေါ့။
Spoon-feed means “to give someone so much help or information that they do not need to try themselves.” ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဇွန်းနဲ့ခွန့်ပေးသလို လုပ်တယ်ဆိုတာကျတော့ အဲဒီ့လူအနေနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့အောင်ကို အကူအညီတွေ၊ အချက်အလက်တွေ ပေးလိုက်တာပါ။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့၊ သင်္ချာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေရတဲ့အထိတော့ တွက်မပြပေမယ့် အဖြေရခါနီးအထိ တစ်ဆင့်စီ အသေးစိတ်ကို ဆရာလုပ်တဲ့သူက နှုတ်နဲ့ ပြောပြော ပေးသွားတာမျိုးကို spoon-feed လို့ ဆိုလိုတာပါ။
သင်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်လာရင် Socratic learning/Socratic Method က အကောင်းဆုံးပဲလို့ အခုခေတ်မှာ အများက လက်ခံထားကြပါတယ်။ Socratic method ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ A pedagogical technique in whichateacher does not give information directly but instead asksaseries of questions, with the result that the student comes either to the desired knowledge by answering the questions or toadeeper awareness of the limits of knowledge. ပါတဲ့။ ဆော့ခရတ္ထစ် သင်ယူမှု၊ ဆော့ခရတ္ထစ်နည်းဆိုတာက အသိပညာကို ဆရာက တိုက်ရိုက် သင်ပြ ပို့ချမပေးဘဲ မေးခွန်းတွေ တစ်သီကြီး မေးသွားရင်းလိုက်တော့ စာသင်သားက ဖြေရင်း ဖြေရင်းကနေ သူ့ဘာသာ သူ သိသင့်တာ သိလာတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အသိပညာနယ်ပယ်ထဲက သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်သဘောပေါက်လာတာမျိုးဖြစ်အောင် သင်ကြားတဲ့ နည်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
120710 Blow up ကကျတော့ အနက်ပွားတွေ များတယ်။ ပေါက်ကွဲတာ၊ ဖောက်ခွဲတာက အနက်ရင်း၊ လေမှုတ်သွင်းတာလည်း အနက်ရင်းလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဓာတ်ပုံကို ပုံကြီးချဲ့တာ၊ မုန်တိုင်း စကျတာ၊ ထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်တာတွေကျတော့ အနက်ပွားတွေပါ။
The extremists threatened to blow up the plane. (ဒါက ဖောက်ခွဲတာ)
Will you help me blow up these balloons? (ဒါက မှုတ်တာ)
I want to see the face of the person withared scarf in that photo. Could you please blow it up? (ဒါက ပုံကြီးချဲ့တာ)
Her dad blew up (at her) when he saw the phone bill. (ဖုန်းကြေးစာရွက်လည်း မြင်ရော အဖေလည်း သူ့သမီးကို ဒေါသူပုန် ထပါလေရော။)
အပေါ်က ဟာတွေမှာ blow sb/sth up လို့ သုံးလို့ရတယ်။ ဒေါဖောင်းသွားတာကျတော့ ဘယ်သူ့ကို ဖောင်းတယ်လို့ ပြောချင်ရင် blow up at sb လို့ သုံးပါတယ်။ နောက်ကို sb ဆို somebody, sth ဆို something လို့သာ သုံးသွားတော့မယ်နော်။
နောက်တစ်ခုက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကိုလည်း blow up နဲ့ပဲ ပြောပါတယ်။ He got blown up by his boss for being late. (ရုံးနောက်ကျလို့ သူ့ အထက်လူကြီးက သူ့ကို ကောင်းကောင်းဆူတယ်) ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ပုံကြီးချဲ့တာကိုလည်း အနက်ပွားနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ Her abilities as an actress has been greatly blown up by the popular press. (အင်မတန် တော်တဲ့ မင်းသမီးပဲလို့ လူကြိုက်များတဲ့ သတင်းစာတွေက အကြီးအကျယ် ချဲ့ကားပြောဆိုထားကြလေရဲ့။)
140710 blow sb’s brains out ဆိုရင်တော့ ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပြောတဲ့ “ဗန်းစကား” (slang) ဖြစ်ပါတယ်။ blow sb’s cover ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့လူ အရေခြုံထားတာကို ခွာချလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ဆိုလိုတာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်တဲ့အခါ သူဌေးသား အယောင်ဆောင်ထားတယ်။ သူက တကယ်တမ်းမှာ သူဌေးသားတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို တစ်စုံ တစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်လိုက်ပြီး သူ့ဇာတိရုပ်ကို ပေါ်အောင် ဖော်လိုက်တာကို blow his cover လို့ ပြောလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Someone has blown his cover and now the girl he’s pursuing for months has turned him off. (သူ့ဇာတိရုပ်ပေါ်သွားတာမို့ သူလိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးက အခု သူ့ကို ခေါက်လိုက်ပြီ။)
Spelling Rules: FB Comment တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်က eatting လို့ ပေါင်းထားတာ တွေ့တဲ့အတွက် “သီတာပြုံးလေး ဘဂျီးမောင်နဲ့ ရ”ဆိုတဲ့ အင်္ဂလပ်စာလုံးပေါင်း စည်းကမ်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ TDPLBGMNR က “သီတာပြုံးလေး ဘဂျီးမောင်နဲ့ ရ”ကို မှတ်ဖို့ပါ။
ဝေါဟာရ တစ်ခုရဲ့ (၁) အဆုံးစာလုံးက အဲဒီ့ TDPLBGMNR ထဲက တစ်ခုခုဖြစ်နေမယ် (၂) အသံက နှစ်သံထက် မပိုဘူး (၃) ဒုတိယနောက်ဆုံးအက္ခရာက vowel (a,e,i,o,u) တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ ဝေါဟာရကို -ing, -er, -est, -ed, -or, -en အစရှိတာတွေ ထည့်တဲ့အခါ TDPLBGMNR ကို နှစ်လုံးဆင့်ရပါတယ်။
အသံနှစ်သံထက် မပိုဘူးဆိုတာက beautiful ဆိုရင် ဗျူး၊ ထစ်၊ ဖွှတ်(လ်)ဆိုပြီး သုံးသံ ထွက်ရတယ်လေ။ အဲဒါဆိုရင် နှစ်သံထက် ပိုပြီပေါ့။
sit ဆိုရင် တစ်သံပဲ။ အဆုံးက T (သီ)။ ဒုတိယနောက်ဆုံးက i ။ ဒါ့ကြောင့် sitting, sitter စသဖြင့်သုံးပါတယ်။ အလားတူပဲ၊ bid, bidding, bidder, chip, chipped စတာတွေမျိုးပေါ့။ သည်နေရာမှာ သတိထားသင့်တာက အသံ တစ်သံတည်းဖြစ်လင့်ကစား အဲဒီ့ TDPLBGMNR ရှေ့မှာ vowel နှစ်လုံးဆင့်နေရင်တော့ အဲဒီ့စာလုံးတွေကို တစ်လုံးတည်းသာ သုံးရပါတယ်။ ဥပမာ feel ပေါ့။ l ကတော့ ဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီ့ L ရှေ့မှာ voweleနှစ်လုံးဆင့် နေတာမို့ feeling, feeler လို့ပဲ ရေးရပါတယ်။ eat လည်း အလားတူပါပဲ။ eating, eater လို့သာ ရေးရပါတယ်။
မှားတတ်တာက write ပါ။ write က မူမမှန်ကြိယာမို့ V3 က written ဖြစ်ပေမယ့် -ing ထည့်ရင်တော့eကို ဖြုတ်ပြီး writing လို့သာ ရေးရပါတယ်။ မူရင်း ကြိယာ write ရဲ့ အဆုံးကeဖြစ်တာမို့ “သီတာပြုံးလေး ဘဂျီးမောင်နဲ့ ရ“စာရင်းထဲကို မ၀င်တာ သတိချင်ကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
150710 လူငယ်လေးတွေ အမှတ်တမဲ့နဲ့ မှားလွန်းနေတာ တွေ့လို့ ပြောရတာပါ။ ကျေးဇူးတင်တဲ့အခါ တစ်ခုခု အတွက် တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီအတွက်၊ ဖိတ်စာအတွက်၊ စာနာမှု ကျေးဇူးတင်တယ်စသဖြင့် နာမ်အတွက်
ကျေးဇူးတင်တာပါ။ ကြိယာနဲ့ ပြောတဲ့အခါကျ နာမ်အတု ဖြစ်တာမို့ ဘိုလိုပြောချင်ရင် ပြောချင်တဲ့ ကြိယာကို ING ထည့်ရပါတယ်။ Thanks for come လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ Thanks for coming မှသာ မှန်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါကို တင်လိုက်တော့ တစ်ယောက်က ဖြည့်လာပါတယ်။ Thank you ကို Thanks you လို့ ပြောနေတာရယ်။ Thanks ကိုကျတော့ Thank ဆိုပြီး ‘s’ မပါဘဲ ပြောနေကြတာရယ်ကိုပါ။
မှန်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ကျကျနန ပြောရင် thank you လို့ ပြောပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲလို့ ပြောချင်ရင် thanks လို့ ပြောပါတယ်။ အလားတူ S ထည့်ပြီး ပြောမှမှန်တဲ့ စကားက congratulations ပါပဲ။ အဲဒီ့မှာလည်း တစ်ယောက်ယောက်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အာလုပ်စကား ပြောရာ ရေးရာမှာ S ပါမှ မှန်ပါတယ်။ မြန်မာအများစုက အဲဒီ့ ဝေါဟာရကိုလည်း S ထည့်ပြောရမှန်း မသိကြပါဘူး။
Thank God/goodness/heaven(s) ဆိုရင် အဆိုးတစ်ခုခု မဖြစ်လာတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ့အဆိုး ပြီးဆုံးသွားတာကို ၀မ်းသာအားရ ပြောတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် တော်သေးတာပေါ့နဲ့ ဆင်မလား မသိဘူး။ Thank God you found the key. (သော့ကို မင်းရှာတွေ့တာ တော်သေးတာပေါ့။) I managed to catch the bus, thank goodness. [တော်သေးတယ် ဘတ်(စ်)ကား မီလိုက်လို့။] Thank heavens nobody was hurt in the accident. (ယဉ်တိုက်မှုမှ တစ်ယောက်မှာ ဒဏ်ရာ မရတာ တော်သေးတာပေါ့။) စသဖြင့် ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်က ဆက်မေးလာတယ်။ without နောက်မှာဆို၇င်လည်း ing ထည့်ရတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ်။ မှန်မမှန် ရှင်းပြပေးပါတဲ့။
မှန်ပါတယ်။ သည်မှာလည်း စဉ်းစားရင် အဖြေတူပါတယ်။ “မရှိဘဲ/ပါဘဲနဲ့”ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ရှေ့မှာ ဘာရှိနိုင်မလဲ။ မင်းမရှိဘဲ မနေနိုင်ဘူးဆိုရင် မင်းက နာမ်လေ။ အလားတူပဲ ထီးမပါဘဲ မသွားနဲ့ဆိုရင်လည်း ထီးက နာမ်။ အဲတော့ အိမ်စာ မလုပ်ဘဲ မပြီးးဘဲနဲ့ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့ “ပြီး”ကို နာမ်အတုဖြစ်အောင် ING ထည့်ပေးလိုက်ရတော့တာပါ။ I can’t live without you. Don’t go out without an umbrella – it’s raining. Don’t go out without finishing your homework. အစရှိသဖြင့်ပေါ့။
170710: Have sb to thank လို့ ပြောရင်တော့ တစ်ခုခုအတွက် အဲဒီ့လူမှာ တာဝန်ရှိတယ်၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ I have my wife to thank for being late. (အခုလို နောက်ကျသွားတာ ကျေးဇူးရှင် ကျုပ်မိန်းမကြောင့်ဗျ။) သည်နေရာမှာ ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားလုံးကို သုံးပေမယ့် မြန်မာစကားရဲ့ ငေါ့ပြောတဲ့ “ကျေးဇူးရှင်”နဲ့ သဘောချင်း အတော်ဆင်လှပါသဗျား။
I’ll thank you to do sth ဆိုရင် Formal English နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာကို ပြသလို့ ရပါတယ်။ I’ll thank you to leave my private papers alone. လို့ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျုပ်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို မထိဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားကို ကျုပ် ကျေးဇူးတင်ရလိမ့်မယ်လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ စိတ်အလိုမကျကြောင်း ထုတ်ဖော်လို့ ရပါတယ်။
၂၁၀၇၁၀ Shame နဲ့ ပတ်သက်လို့ “ရှက်တယ်၊ အရှက်”ဆိုတဲ့ အနက်မျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ သုံးတာကို ရှေ့မှာ တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ Put somebody or something to shame ဆိုရင် တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်ယောက်/တစ်ခုခုကို အရှက်ရစေတယ်လို့ အနက်ထွက်ပေမယ့် တခြားတစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်ခုခုနဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်၊ တစ်ခုက …စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းအောင် ချာနေတာကို ပြောတာမျိုးဖြစ်နေတတ်သလို It puts me to shame ဆိုရင် အားနာစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောတာမျိုး သွားတတ်ပါတယ်။
Your beautiful handwriting puts my untidy scrawl to shame. ဆိုရင် “မင့်လက်ရေးနဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ မသပ်ရပ်တဲ့ ငါ့လက်ရေး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးက စိတ်ပျက်စရာကြီးနော်”လို့ ပြောလိုက်တာမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။
It puts me to shame that I still haven’t replied to Khin Khin’s letter. ဆိုရင်လည်း “အခုထက်ထိ ခင်ခင့်စာကို မပြန်ဖြစ်သေးတာ ငါ့မှာ အားနာစရာ ကောင်းနေတယ်”ဆိုတဲ့ အနက်မျိုးကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
တချို့က အင်္ဂလိပ်စကားမှာ အားနာတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး သတ်သတ် မရှိဘူး။ မြန်မာမှာပဲ ရှိတာလို့ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အားနာပါတယ်လို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုလို့ ရတဲ့ စကားလုံး အတိအကျတော့ မရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အထက်က နမူနာ ပြတဲ့ ဝါကျမှာ တော့ “ရှက်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ မြန်မာလို ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင် အီလည်လည်ကြီးဖြစ်နေနိုင်ပြီး “အားနာ”ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ကျတော့မှ ပိုလို့ အဆင်ပြေနေတာကို သတိထားမိကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
230710 To my shame ဆိုရင်လည်း “အားနာတယ်”ဆိုတဲ့ အနက်မျိုးပဲ ထွက်လာပါတယ်။ To my shame, I never wrote and thanked Aunty Moe for her present. (ဒေါ်လေးမိုး ပို့လိုက်တဲ့ လက်ဆောင်အတွက် ကျေးဇူးတင်စကား မပြောဖြစ်ခဲ့တာ ငါ့မှာ အားနာစရာကောင်းနေပြီ။) ရှက်စရာ ကောင်းနေပြီလို့ ဘာသာပြန်ရင် မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် အူလည်လည်နိုင်နေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်က မေးလာပါတယ်။ It’sashameလို့သုံးတာကကော ဆရာ။ ခဏခဏကြားဖူးနေလို့ ရှက်ဖွယ်လို့ အဓိပ္ဗါယ်မရမှန်းတော့ သိတယ်။ ဥပမာ It’sashame that you are not coming for the party tonight. အဲလိုမျိုးပေါ့။ အဲဒါကို မြန်မာလို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ကောက်မရမလဲ။ “နာလိုက်တာကွာ” ဆိုတာမျိုး အားမလိုအားမရဖြစ်တဲ့ သဘောမျိုး အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရမလား တဲ့။
အဲဒါကို အခုလို ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
“It’sa(great) shame” is used to express an unlucky situation. ညည်း မြန်မာပြန်တာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ “နာသကွာ”ဆိုတာနဲ့ ဂွပ်ခနဲကို အံကျသွားတယ်။
တစ်ဆက်တည်း ပြောရရင် It’sacrying shame ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်က မလုပ်သင့်တာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အခါမှာ ပြောတာမျိုးပါ။ It wasacrying shame that you hadaproper breakfast this morning to prove you were determined. “ညည်းနှယ် မတော်တရော်အေ… ညည်းကိုယ်ညည်း စိတ်ခိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြဖို့ ကနေ့မနက် မနက်စာကို ကျကျနန စားလိုက်တယ်ပေါ့။”
နောက်တစ်ယောက်က “အားနာတယ်ဆိုတာကိုသုံးလို့ လွယ်နားလည်လွယ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိသေးလား။ ဥပမာ… ကိုယ်ကသူများကိုလက်ဆောင်းပေးတာတို့ တစ်ခုခု ကျွေးမွေးတာတို့မှာ အားမနာပါနဲ့ စားပါ၊ ယူပါ၊ အဲဒါမျိုးကိုဘယ်လို ပြောရမလဲ။ ပြီးတော့ .. ကိုယ်ကပြောရင်ရော ငါအားနာလို့ မလိုက်တော့ပါဘူး။ မယူတော့ပါဘူး။ အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ afraid of ကရော အားနာတယ်လို့ ပြောတာဘဲလား”တဲ့။
အင်္ဂလိပ်က အစားအသောက်မှာ အားနာလေ့ မရှိပါဘူး။ အဲဒါကျ လူမျိုးစရိုက်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့တွေက ကိုယ်စားတုံး သောက်တုံး ဧည့်လာရင် “စားပါဦး” ဆိုပြီး “အားနာပါးနာ”ခေါ်တာ။ တကယ် ၀င်စားသွားတော့မှ ချောက်ကျကုန်တတ်တာမျိုး။ အနောက်တိုင်းမှာက အဲလို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ ကျွေးရင်လည်း တကယ် ကျွေးနိုင်လို့ ကျွေးတာ။ အဲလိုဆို စားတဲ့သူက စားချင် စားတာပဲ။ အားရပါးရစားတာ။ ကျုပ်တို့လို ပဲများမနေဘူး။ လက်ဆောင် ပေးတယ်ဆိုရင်လည်း ယူတာပဲ။ ပေးတဲ့သူက ပေးနိုင်လို့ ပေးမှတော့ ယူရတာ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှု။ ယူပြီး ထုပ်ပိုးထားရင် ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်၊ ပြီးရင် ကိုယ် သဘောမကျဦးတောင် တအားသဘောကျပြ၊ ကျေးဇူးတင်ပြတာ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ ခေါ်ရင်လည်း သူတို့က အားနာ ပါးနာ မခေါ်ဘူး။ မလိုက်တဲ့သူကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ အကြောင်းရှိလို့သာ မလိုက်တာ၊ အားနာလို့ဆိုတာမျိုးတွေ မရှိဘူးခင်ဗျ။
ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါ အဲဒီ့ဘာသာစကားကို ပြောဆို သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဓလေ့စရိုက်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ လေ့လာနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
afraid of ဆိုရင် တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတာ၊ ကြောက်တာကို ပြောတာပါ။ My wife’s always been afraid of geckos. (ကျုပ်မိန်းမ အိမ်မြှောင် ကြောက်တတ်တယ်။) Don’t be afraid to say what you think. (မင်း စိတ်ထဲရှိတာ ပြောရမှ မကြောက်ပါနဲ့။) စသဖြင့်ပေါ့။
အားနာတာကျတော့ I’m afraid… နဲ့ ပြောတယ်။ This is your room – it’s rather small, I’m afraid. (ဒါ မင်းနေရမယ့် အခန်းပဲ။ အားတော့ နာသကွာ နည်းနည်းတော့ ကျဉ်းသဟေ့။) I don’t agree at all, I’m afraid. (ပြောရတာ အားနာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျုပ် လုံးလုံး သဘောမတူဘူး။) I’m afraid you’ve completely misunderstood the question. (ပြောရတာ သိပ်တော့ မကောင်းပေမယ့် ပြောရဦးမယ်။ ကိုယ့်လူက မေးခွန်းကို လုံးလုံး နားမလည်ဘဲကိုး။) စသဖြင့်ပေါ့။
Cho Win Thant: သမီးလေးကို ဘီစီ စကားပြော ကလပ်ကနေ မနေ့ကပဲ သင်လိုက်တာ မြန်မာလို အားနာတယ်ဆိုတာကို timid တဲ့။
Atta Kyaw: ဟယ်… timid ကို အားနာတယ်လို့ ဘယ်သူကများ သင်လိုက်လည်း မသိ။ သေတော့မှာပဲ။ ကြောက်တတ်၊ ရှက်တတ်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတာ၊ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လုပ်တတ်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ဘီစီက အမြန်ဆုံး ထုတ်လိုက်။ မဟုတ်တာတွေ သင်ပေးနေတယ်။ ဖြစ်သင့်တာက ဘီစီလို နေရာမျိုးမှာ မြန်မာစကား တစ်လုံးမှ မပြောဘဲ အင်္ဂလိပ်လိုချည်း သင်တယ်ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်။ ဘာတွေလဲဟာ…
Cho Win Thant: ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ မနေ့ကပဲ သူ့အဖေလည်း တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ သူက ရေးလာတာ အားနာ ကျွိုးနွံ တဲ့ timid = shy= nervous တဲ့။ သမီးရဲ့ သင်တန်း ငါးခုအပြီးမှာ ဘီစီက တော်တော် အဆင်မပြေတော့ဘူးလား ထင်မိနေတယ်။ အဲလိုပြောတော့လည်း စာ လုံးဝ ၀ါသနာမပါတဲ့ ကိုယ့်သမီးအကြောင်းကလည်း ကိုယ်ကဘဲအသိဆိုတော့ကာ…
Atta Kyaw: shy, nervous က မှန်ပါတယ်။ အားနာ၊ ကျိုးနွံဆိုတာက သောက်တလွဲ။ အဲဒါပဲဟ… မြန်မာပြည်မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့သူတွေက အင်္ဂလိပ်စာကိုသာ နင်းကန်အထင်ကြီးပြီး ဗမာစာကျ မတတ်၊ ဗမာစာ သိပ်တတ်တဲ့ သူတွေကကျတော့လည်း အင်္ဂလိပ်စာကို မကျွမ်းကျင်။ ကြားထဲက ကလေးတွေ ဒုက္ခများနေတာ။ နောက်တစ်ခါ မှတ်ထား၊ မြန်မာဆရာတွေ သင်တဲ့ဆီမှာ ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ဖို့ မလွှတ်နဲ့တော့။
Cho Win Thant: သူရို့ကလည်း နေးတစ်နေးတစ်ဆိုလို့ပါ ဆရာရယ်။ ခုတော့ တော်တော်ဆုံးကုန်ပြီ ဟိဟိ
Soe Myat Myo Shwe: Is ‘ on account of ‘ = ‘ on behalf of’ ? and could it be used formally ? Like “those debts are settled on account of someone’s?”
Atta Kyaw: Absolutely not. On account of sth (formal English) = because of sth
Your example sentence will be proper if it is rewritten: Those debts are settled with money out of someone’s account.
Soe Myat Myo Shwe: Wait, what about we settle for that someone? just on behalf of?
Atta Kyaw: You settle the payment someone owes “out of” your account.
Soe Myat Myo Shwe: မဟုတ်ဘူး ဆရာ နည်းနည်းကလေး လွဲနေတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်စား ပေးချေတာကိုမေးတာပါ။ ဥပမာ ဆရာ့ Bill တွေကို သမီး ရှင်းပေးတာမျိုးကို ဘယ်လိုပြောလဲ .. On behalf of ပဲလား။ အဲဒါမေးတာ 😀
Atta Kyaw: ညည်းက ဇွတ်ပဲ။ အဲဒီ့အတိုင်းပဲ ပြောတယ်ဟ။ နည်းနည်းလေးမှ မလွဲဘူး။ ညည်းက account ကို ထည့်လို့ ရှုပ်နေတယ်။ Will you settle the bill for me? Will you pay it for me? ညည်းရောနေတာက on the house နဲ့ ရောနေတာ။ ဆိုင်ရှင်က အလကား ကျွေးတာကို on the house လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကို သွားပြီး on my account လုပ်လို့ မရဘူး။ on my account လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ because of me ဆိုတာ အလိုလိုဖြစ်သွားပြီ။
When you settle KKM’s payment out of your account, it means you pay the money for KKM, that is, you’re paying the money on his behalf.
Soe Myat Myo Shwe: ok 😛 and Thank you for such patience .. hehe
Atta Kyaw: Oh, go to hell.
Soe Myat Myo Shwe: What? When I said thank you, no sarcasm intended 😦
240710 မျက်စိ နည်းနည်းနောက်လာတဲ့ တစ်လုံးကို ပြောပါရစေဦး။ Sir ဆိုတဲ့ အသုံးပါ။ အဲဒါက ကိုယ်က ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့သူ၊ အထူးသဖြင့် စားသောက်ဆိုင်၊ လေယာဉ်၊ ဘတ်(စ်)ကား စတာတွေက ၀န်ထမ်းတွေကနေ ကိုယ့်ကို လာအားပေးသူ အမျိုးသားကို သုံးတဲ့အသုံမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အာဏာပိုင် (ဥပမာ မူလတန်း ကျောင်းသားလေး အတွက် မူလတန်းဆရာက အာဏာပိုင်ပါ။ တပ်သားလေးအတွက်လည်း ဗိုလ်အဆင့်ဟာ အာဏာပိုင်ဖြစ်ပါတယ်) အမျိုးသားကို သုံးတဲ့ အသုံးပါ။
ကျန်တဲ့ လူလူချင်း “ဘယ်တော့မှ” မသုံးပါဘူး။ သားအဖချင်းတောင် မသုံးပါဘူး ခင်ဗျာ။ ကိုယ့်အလုပ်ရှင်ကိုလည်း Sir… See more သုံးစရာ “လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ” မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသား၊ အနောက်တိုင်းသားဆိုရင် ပိုလို့တောင် သတိထားတော် မူကြစေလိုပါတယ်။ မြန်မာတွေကို အထင်သေးကုန်တာ အဲလို နေရာတကျ မသုံးတတ်ဘဲ တဆာတည်း ဆာနေကြလို့ပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော် သံရုံးတွေမှာ ၁၅ နှစ်လောက်အမှုထမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ သံအမတ်ကိုတောင်မှ မဆာပါခင်ဗျား။ လေးစားသမှုပြချင်ရင်၊ ကိုယ်ယဉ်ကျေးကြောင်း ပြချင်ရင် မစ္စတာ/မီး(ဇ်) (Mr./Ms.) ခံပြီး သူ့ရဲ့ မိသားစု နာမည် (နောက်ဆုံးနာမည်)ကို ခေါ်ရင် လုံလောက်ပါတယ်။ Brad Pitt ကို လေးလေးစားစားနဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ချင်ရင် Mr. Pitt ပေါ့။ Sandra Bullock ဆိုရင် Ms. Bullock ပေါ့။ သည်လောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အမျိုးသမီးကို မဆာရပါဘူး။ Madam အတိုကောက် Ma’am [မယ်(မ်)]လို့ သုံးရပါတယ်။ ဒါလည်း အထက်ကအတိုင်းပါပဲ၊ ကိုယ်က စားပွဲထိုး၊ အဲဒီ့အမျိုးသမီးက လာစားတဲ့သူ၊ ကိုယ်က မူလတန်းကျောင်းသား၊ သူက ဆရာမ၊ ကိုယ်က တရားခံ၊ သူက တရားသူကြီးမ ဆိုမှသာ သုံးရပါတယ်။ သာမန် အသက်ကြီးသူ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ တက္ကသိုလ်ဆရာမ၊ အလုပ်ရှင်များကို လုံးဝရော ပြားဝရော မသုံးသင့်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
ခြွင်းချက်ကတော့ ရုံးသုံးစာ (တရားဝင်စာ) ရေးတဲ့အခါ စာလက်ခံဖတ်မယ့်သူရဲ့ နာမည်ကို မသိဘူးဆိုရင်တော့ Dear Sir/Dear Madam ဆိုပြီး အစချီရကြောင်းပါ။
V J Kyaw Zwa: ဘတ်စကား လက်မှတ်စစ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေက ဒါလင်လို. ခေါ်တာတော့ ခံဖူးတယ်ဗျာ။ အဲဒိအသုံးအနှုန်းလေးလဲ လုပ်ပါဦး။ ကိုယ်ထင်ထားသလိုမျိုးဆိုရင် ရင်ခုန်ချင်လို.ပါ။ … 😛
Atta Kyaw: ပြောဘူး။ ငရဲကြီးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါး ကိုယ့်အတွေးလေးနဲ့ကိုယ် ရင်ခုန်နေတာ မဖျက်ကောင်းဘူးလို့ အမေက မှာထားတယ်ဗျ။ 😀 😀 😀
Atta Kyaw: တကယ်တော့ အဲဒီ့ ဒါလင်က အတော် အပြောရခက်တဲ့ စကားလုံးဗျ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် ပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ (အင်္ဂလိပ်/အမေရိကန်/အော်ဇီမတွေ)ဆိုရင်တော့ အဲဒါ အကောင်းခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်ရလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကို နိုင်ငံခြားသားမှန်းသိလို့ ဒေါက်ဖြုတ်ချင်တဲ့အနေနဲ့ ခေါ်တာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ကိုယ့်ကို တမင့်ကို သရိုးသရီဖြစ်စေချင်လို့ ခေါ်တာ။ အဲတော့ သူက ကိုယ့်ကို ဒါလင်လို့ ခေါ်ရင် သူ့ကိုလည်း ကိုယ်က ဆွိထာ့(ထ်) (sweetheart) လို့သာ ပြန်ခေါ်ပစ်လိုက်ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ သည်အသုံးက သိပ်ရှေးကျသွားပြီ။ အဘိုးတို့ အဘွားတို့ခေတ်က အသုံးလို့ ခံယူထားကြတယ်။ မြန်မာမှာ အချစ်ရေတို့၊ အသက်ရေတို့ကို အခုခေတ်လူတွေ ဝေးစွ၊ ကျွန်တော်တို့လို ဘိုးတော်တွေတောင်မှ မသုံးတော့တာမျိုးပေါ့။
ကပြားတစ်ယောက်တွေ့ဖူးတယ်။ သူက မြင်သမျှ ငယ်ငယ်ချောချော မိန်းကလေးတိုင်းကို ဒါလင်ခေါ်ပြီး ပြောတတ်တာ။ ဒါကကျတော့ အဲဒီ့အပေါ်မှာ သာယာသွားတဲ့သူဆိုလည်း မျှောလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ဗျ။ ယောက်ျားချင်း အဲလို ခေါ်လာရင်တော့… အင်း… ၅၀-၅၀ သမားကို ထူးပြီး သင်စရာ မလိုဘူးပေါ့လေ။ 😀
Oakker Seithu: ကျေးဇူးပါဆရာ… “ဆရာ” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းရော ရှိပါသလား။ အခု ”ကျေးဇူးပါဆရာ”မှာလိုမျိုးပေါ့… သည်မှာတော့ သင်တန်းတွေမှာဆို တီချယ် တီချယ်နဲ့ ပြောနေကြတာများနေလို့ပါ… ‘master’ လို့သုံးရင်ရပါသလား။
Gar Field: I also want to know it !
Atta Kyaw: တီချယ်က မြန်မာတို့ရဲ့ အသုံးပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ ဆက်ဆံရေးက အလျားလိုက် ဆက်ဆံရေးပါ။ ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံပါတယ်။ ရိုသေလေးစားမှုကို ပြတဲ့အနေနဲ့ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို Mr./Mrs./Ms. နဲ့ နောက်ဆုံးနာမည်နဲ့ တွဲပြီး ခေါ်တာ အာဏာကုန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခေါ်ခံရသူက ဟန်ကြီးပန်ကြီး မနိုင်ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးနေလျက်နဲ့ အဲလို Mr./Mrs./Ms. နဲ့ တွဲပြီး အခေါ်ခံရရင် မအီမသာဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။ စိမ်းတယ်လို့ ခံစားလာရတတ်တယ်။ သည်အခါမှာ သူတို့က ပထမနာမည်နဲ့ပဲ ခေါ်ခိုင်းတတ်ပါတယ်။ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ သံအမတ်တွေထဲမှာ တချို့က သူတို့ရဲ့ ပထမအမည်ကို ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ ပထမအမည်ဆိုတာက Tom Cruise ဆိုရင် Tom ပေါ့။ Julia Roberts ဆိုရင် Julia ပေါ့။ (အဲဒီ့ ပထမအမည်ကို “ဘယ်တော့မှ” Mr./Mrs./Ms. နဲ့ တွဲ မခေါ်ရပါဘူး။ သည်အတိုင်းသာ ခေါ်ရပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ဒါလည်း နေရာနဲ့ နေရာပါ။ သူက ခွင့်ပြုထားလို့၊ တောင်းဆိုလို့ ပထမအမည်ကို ကိုယ့်ချင်းကြား၊ တခြား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ချင်း ကြားမှာ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲပေမယ့် အခမ်းအနားတွေ၊ လူစိမ်းတွေ ရှေ့မှာတော့ သူ့ကို ထိုက်သင့်တဲ့ ဂုဏ်နဲ့အညီ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲရပါတယ်။
ပြဿနာက ထောင်လိုက် ဆက်ဆံရေး ပုံစံခွက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့တိုင်းသားတွေပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ မယဉ်ပါးတော့ မခေါ်တတ်၊ မပြောတတ် ဖြစ်နေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မာချင်းဆိုရင် အစ်ကို၊ အစ်မ၊ ဦးလေး၊ ဆရာ ထိုက်သင့်သလို ခေါ်ဝေါ်ပြီး နိုင်ငံခြားသား (အထူးသဖြင့် အနောက်တိုင်း သားတွေ) ကိုကျရင်တော့ သူတို့ယဉ်ကျေးမှု၊ သူတို့ပုံစံအတိုင်း အလိုက်သင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းကသာ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာကို အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ချင်ရင် အခု အများစု ရေးနေသလို Saya ပဲ လုပ်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ။ အဲဒါက အဆင်အပြေဆုံးပါ။
နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတော့ သွားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ အဲလို အလုပ်ကောင်းလို့ အနှိမ်ခံနေရတဲ့ မြန်မာတွေ မြန်မာပြည်မှာ အရှင်လတ်လတ်ရှိနေပါသေးတယ်။ ပြောလို့လည်း မရပါဘူး။ သူတို့က ဆရာကြီး၊ ဆရာလေး၊ ဆရာမကြီး၊ ဆရာမလေး ဆိုပြီး မျက်နှာဖြူတွေကို ခေါ်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ အခုတော့ သူတို့ဘ၀တွေ မလှုပ်သာ မလွန့်သာနဲ့ မ၀ရေစာပေးထားတဲ့ ဒေါ်လာလေးတွေ မက်ရင်း အနှိမ်ခံနေရလေရဲ့။ တကယ့် လက်ရှိဘ၀မှာ လတ်တလော ဖြစ်နေတာနော်။ မကောင်းတတ်လို့ ဘယ်မှာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ထုတ်မပြောတာပါခင်ဗျား။
Hana San: ကျောင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို Mr. / Ms.တပ်ခေါ်ကြတာမှာ family name နဲ့ တွဲခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သာမီးနာမည်ကို သူတို့က အမြဲ family name နဲ့ given name မှားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကြိုက်သလိုခေါ်ဆို ထားလိုက်တယ်။ တစ်ခုရှိတယ်ဗျ… PhD ဆရာကြီးတွေက သူတို့ကို Mr. ခေါ်ရင် ကြိုက်ဘူး။ Dr. ဘယ်သူဆို ခေါ်မှ … 😀
Atta Kyaw: မိသားစုနာမည်နဲ့ အမေပေးတဲ့ နာမည်နဲ့ မှားတာက အာရှမှည့်ပုံကြောင့်ပါ။ ဂျပန်တော့ မသိဘူး။ တရုတ်နဲ့ ကိုရီးယားတွေမှာ ပထမဆုံးနာမည်က မိသားစု နာမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး နာမည်က အမေပေးတဲ့ နာမည်ဖြစ်နေတာကိုး။ Kim Sae-Hyun ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားမိန်းကလေး အမည်မှာ Kim က မိသားစု နာမည်၊ Sae-Hyun က အမေပေးတဲ့ နာမည်လေ။ အနောက်တိုင်းသားတွေက အဲဒါကို ကွဲတဲ့သူ ရှိတယ်။ မကွဲတဲ့ သူတွေ ရှိတယ်။
Ph.D. ဆရာကြီးတွေထဲမှာလည်း ပြည့်တဲ့အိုးနဲ့ မပြည့်တဲ့အိုး ကွာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်တယ်၊ Mr./Ms. လို့ ခေါ်တာတော့ မှားတယ်။ သူရို့ကျတော့ Dr. ခေါ်မှ မှန်တာကိုး။
Myo Tha Htet: သမ္မတ အိုဘားမား ၀ါရှင်တန်ကို အီလီနွိုင်းပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် အမတ်အဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ပထမဆုံး ရောက်လာတော့ သမ္မတဘုရ်ှနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ သူက ဘုရှ် ပခုံးကို ဖက်ပြီး စကားပြောတယ်တဲ့။ သူ့လက်က ဒါမျိုး အကျင့်ပါနေတယ်လို့ သူ့စာအုပ်မှာ တစ်ခါ ဖတ်ဖူးတယ်။ သူတို့က ဒါမျိုး လုပ်လို့ ရတယ်နော်။
ပြောချင်တာက ဒီလိုပါ၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်တုန်းက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တွေ့ရင်ရော သူ့ရုံးခန်းက ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စကားပြောရင်ကော အိုဘားမားက ဒါလင် ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောတတ်တယ်..သူက လူချစ်လူချစ်လည်း များတယ်၊ စကားပြောကောင်းတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်၊ မဲတွေ ရအောင်လည်း ဒီလို ခေါ်တာ ပြောတာ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုခေါ်တာ (နောက်ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွေ့တာ ဖက်တာ) အိုဘားမား ဝေဖန်ခံရတယ်။ အခုတော့ သိပ်မလုပ်တော့ဘူး ထင်တယ်။ သမ္မတလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီကိုး။ ဒါလင်ဟာ သတိတော့ ထားရမယ့်ပုံရှိတယ်။ ခေါ်တော့ ခေါ်ချင်သား…။
Atta Kyaw: ခေါ်ချင် ခေါ်လိုက်စမ်းပါဗျာ… ရဲရဲ… အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့ ယောက်ျားချင်း အရင်ခေါ်ကြည့်ပါလားဟင်… 😀
250710 အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ Mr. ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုပြီး နာမည်တပ်ခေါ်တာ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် နာမည် မသိသူတစ်ယောက်ကို Mister လို့ ပြောတာဟာ ရိုင်းပါသဗျာ။ ကိုယ်နဲ့ မသိသူ ယောက်ျာသား တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မကြည်လင်တဲ့အခါမှသာ သုံးရတာမျိုးပါ။ Please, mister, can you sit down? ဆိုရင် “ဟေ့လူ… တဆိတ်လောက် ထိုင်စမ်းပါဗျာ”ဆိုတဲ့ လေသံမျိုး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Someone: I think it is not rude but rather girlish. It is not rude when you hear from girls. See “It is not part of the deal Mister!” it sounds cheeky though.
But if it comes fromaguy, he may beafag as in prison jokes story lines, “Please be gentle Mister Smith!.”
1. the complete form of the title Mr
2. an informal and ”often ‘rude’ form of address” foraman whose name you do not know
e.g. Listen to me, Mister, I don’t ever wanna see you in this bar again.
(Ref: Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 3rd Edition, 2008 Reprint)
Author lettwebawPosted on 21 October 2010 21 October 2010 Categories English Lesson, Reproduction11 Comments on A Jumble of English Words and Phrases
You may copy and paste my writings, but…
ကနေ့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် ဆရာဝန် တစ်ဦးဆီက ဓာတ်ချောစာ တစ်စောင် ၀င်လာပါတယ်။ သူက ကျွန်တော် တင်ခဲ့တဲ့ “ခင်မင်မှု သံမှိုများ”ကို သဘောကျလို့ သူ့မိတ်ဆွေတွေဆီကို ဖြန့်ဝေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီက ကြိုတင် ခွင့်မတောင်းခဲ့မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ကြောင်း စာပို့လာတာပါ။
ကျွန်တော် သူ့ကို အားနာသွားပါတယ်။
မကြာသေးခင်က ကျွန်တော် တင်ခဲ့တဲ့ ဦးဘုန်း(ဓာတု)ရဲ့ “အာဖတာ-ယူ” ဆိုတဲ့စာကို “အသိုင်းအ၀ိုင်း” အမည်ခံထားတဲ့ တစ်စုက သည်တိုင်း ကူးယူပြီး Facebook မှာရော၊ သူတို့ရဲ့ ပင့်ကူအိမ် စာမျက်နှာမှာပါ တင်လိုက်ရာမှာ မည်သူမည်ဝါ တင်သည်ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းလဲ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် Facebook စာမျက်နှာမှာ ထောက်ပြတဲ့ စာတစ်ပိုဒ် ရေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဦးဘုန်း (ဓာတု)ရဲ့ စာကို သူတို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နည်းပြောရရင် မူလ စာမူ ဖော်ပြရာ ရွှေမန္တလေး ဂျာနယ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဦးဘုန်း (ဓာတု)ရဲ့ “တွင်း” အမည်ပါ စာအုပ်ကိုသော်လည်းကောင်း သူတို့ လက်နဲ့တောင် မထိဖူးပါဘူး။
(၂) သူတို့ လက်နဲ့ စာတစ်လုံးစီ၊ ၀ါကျတစ်ကြောင်းစီ အပင်ပန်းခံပြီး ကွန်ပျူတာပေါ်ရိုက်၊ အင်တာနက်ပေါ် တင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ cut & paste လုပ်လိုက်တာလေးပဲ သူတို့ဘက်က အားစိုက်ရတာပါ။
ကြိုက်လို့ cut & paste လုပ်တာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် မည်သူ မည်ဝါ တင်သည်ဆိုတာကြီးကို ထည့်လိုက်တာက အတော် ရုပ်ပျက်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဦးဘုန်း(ဓာတု) နာမည်ပါရင် ပြီးတာပဲ။ ဖတ်တဲ့သူ၊ တစ်လုံးစီ ကူးတင်တဲ့သူ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်သွားပါတယ်။ မည်သူမည်ဝါ တင်သည်လို့ ပြောရအောင် မူရင်း Facebook မှာ တင်ထားတဲ့ ရေးထုံး အလွဲမှသည် ပုဒ်ဖြတ်ပုံအထိ တစ်ထပ်တည်း တူနေတာကတော့ ဆိုးပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောမှ ရပါတော့မယ်၊ အဲဒါကို Facebook မှာ တင်တာ၊ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်အိမ်တည်း နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ဆိုပြီး ညွန်းခဲ့တဲ့သူက ကျွန်တော်ပါ။
ဒါကို လူတစ်ဦးချင်းစီ နာမည်နဲ့ လုပ်ရင်တောင် ကျွန်တော် ဘာမှ ပြောမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “အသိုင်းအ၀ိုင်း”ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခံထားတာက လုပ်လိုက်တာမို့ ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ပို့(စ်)မှာ တင်ထားတာတွေ့တယ်၊ ကြိုက်လို့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်လို့ ရေးလိုက်လည်း ဖြစ်တာပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း Facebook မှာပဲ၊ သည်တိုင်း share လိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်သူ တင်တယ်ဆိုတာ ပြောစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။ အခုဟာက အညွန့်ခူးတာ သက်သက် ဖြစ်နေတယ်။
ပိုဆိုးသွားတာက သူတို့ရဲ့ ပင့်ကူအိမ်စာမျက်နှာမှာ ကျွန်တော့်ဇနီး တင်ထားတဲ့ ဦးဘုန်း(ဓာတု)ရဲ့ နောက်ထပ် တစ်ပုဒ်အပါအ၀င် စုစုပေါင်း နှစ်ပုဒ်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ တင်ထားတာပါပဲ။ “အသိုင်းအ၀ိုင်း”နာမည်ခံယူထားသူတွေက အသေးလေးတွေကို ဂရုမထားတာ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကိုတောင်မှ အလေးထားရကောင်းမှန်း မသိရင် ကျန်တဲ့ အကြီးကြီးတွေအတွက် သူတို့ “အသိုင်းအ၀ိုင်း”ကို ဘယ်လိုလုပ် ကိုးစားလို့ ရပါတော့မလဲ။ မဆိုင်တာတွေ ပြောတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား အထင်အရှားရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် လူတိုင်းလုပ်နေတာပဲ၊ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ ပျက်နေတာပဲ၊ ကျုပ်တို့မှ လာ လက်ညှိုးမထိုးနဲ့ဆိုတဲ့ စကားတိမ်တိမ်လေးလည်း မပြောစေချင်ပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီက အဲလို ပြောလာရင် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ ဖွဲ့လိုက်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ရင်တောင်မှ ကိုယ်လုပ်သမျှဟာ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်မှန်း မြင်တတ်မှ လူပီသမှာပါ။ အခု “အသိုင်းအ၀ိုင်း”ကို ခြေရာခံလိုက်တဲ့အခါ အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ရှိပြီး နာမည်တူ၊ ပြထားတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းပုံချင်းလည်း တူ၊ အဖွဲ့အကြောင်း ဖော်ပြချက်နဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ တစ်ထပ်တည်းတူနေတဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၀၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလည်း ရှိနေတာကိုပါ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲတော့ သည် “အသိုင်းအ၀ိုင်း”ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ နှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုထားတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကို ထောက်ပြတဲ့ စာတစ်ပိုဒ်ကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဒါကို ဟိုဆရာက ဖတ်မိသွားပုံရပြီး ကျွန်တော့်ဆီ တောင်းပန်စာ လှမ်းပို့တာပါ။ ကျွန်တော့်ဘက်က ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်)ပေါ်မှာ တင်ထားတာကို မည်သူမဆို ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ လိပ်ပြာ သန့်ချင်တဲ့သူဆိုရင် ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ရည်ညွှန်း စာအုပ်/စာနယ်ဇင်း/ဘလော့(ဂ်)လိပ်စာ ထည့်လိမ့်မပေါ့။ မထည့်ကြတော့လည်း ကျွန်တော်က ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ လိုက်တရားစွဲနေရအောင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေက အခုမှ ပြင်ဆင်ဆဲ အဆင့်ရှိသေးတာပဲ။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းစီ သဘောကျလို့ လက်တို့တာ၊ ကူးယူပြီး ဓာတ်ချောစာနဲ့ ပို့တာ၊ Facebook မှာ သည်လင့်(ခ်)ကို ဖော်ပြတာများဟာ စာဖတ်သူတိုင်း လုပ်နေကျ အလုပ်ပါ။ ဘာ မူပိုင်ခွင့်နဲ့မှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ အစားကောင်း စားရတဲ့အခါ မိတ်ဆွေတွေဆီ ဝေမျှတဲ့ သဘောပဲဟာ။ ကိုယ်ကျိုး ကိုယ်စီးပွား ဘာမှ မပါပါဘူး။ အလွန်ဆုံးမှ မိတ်ဆွေ တိုးတာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ တခြား ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မရှိပါဘူး။ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းချင်း ကိုယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်လေး ကောင်းတယ်၊ မကြည့်ရသေးရင် သွားကြည့်၊ ဘယ်ရုံမှာ ပြနေတယ်၊ ပွဲချိန်က ဘယ်နှနာရီ၊ ဘယ်အချိန်ဆိုရင် လက်မှတ်လွယ်တယ် စသဖြင့် ပြောသလိုမျိုးလောက်ပါ။ အဲဒီ့အတွက် ကျွန်တော့်ဘက်က ဘာမှ ဥပါဒ်နေစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။
“အသိုင်းအ၀ိုင်း၊” “အုပ်စု”မှာ ကျတော့ အကျိုးစီးပွား ပါလာပါပြီ။ ငွေကြေးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်အင်အား တောင့်တင်းရေးဟာ အသိုင်းအ၀ိုင်း/အုပ်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခါမှာ စည်းရုံးရေးကို ဘက်ပေါင်းစုံက လုပ်ရပါတော့တယ်။ ဒါမျိုးအတွက် သုံးတာကျတော့ ပုဂ္ဂလိက သဘောမဆောင်တော့ပါဘူး။ သည်အခါ အင်တာနက်မှာမို့လို့ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ မိမိတို့ရဲ့ ကောင်းမြတ်သော မနဿီကို ပေါ်လွင်စေဖို့အတွက် မူရင်း စာမျက်နှာ၊ မူရင်း ပို့(စ်)၊ မူရင်း မှတ်စု ရေးသူကို ဖော်ပြပေးသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ဘယ်ကမှန်း မသိ ရလာတဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း ဓာတ်ချောစာက ယူတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဓာတ်ချောစာက ရတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြခြင်းမျိုးတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်းမှာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း/အုပ်စုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မြင့်တက်လာမှာဖြစ်သလို စည်းရုံးရေး အင်အားကိုလည်း အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်နေစေမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်က အဲဒီ့အချက်ကို ထောက်ပြလိုက်တာပါ။
ထပ်ပြောပါရစေ။ ဒါ တစ်ဦးချင်းစီ လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေကြတာနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ပါဘူး။ အဲဒီ့အတွက်လည်း ကျွန်တော့်ကို ခွင့်တောင်းစရာ မလိုပါဘူး။ စာဖတ်သူချင်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဘယ်က ရတယ်၊ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာလည်း ထည့်ချင် ထည့်ကြပါ၊ မထည့်ချင် မထည့်ကြပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမှ အရေးမကြီးပါဘူး။
အလားတူပဲ၊ ဘလော့(ဂ်)များ အပါအ၀င် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း ကြိုက်သလို ကူးယူဖော်ပြနိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့မှာလည်း ဘယ်က ရတယ်၊ ဘယ်သူရေးတယ် ဆိုတာလည်း ထည့်ချင် ထည့်ကြပါ၊ မထည့်ချင် မထည့်ကြပါနဲ့။ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမှ အရေးမကြီးပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လိပ်ပြာကပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် ပြောနေတာက “အသိုင်းအ၀ိုင်း/အုပ်စု”နာမည်ကို ခံယူထားသူတွေ ဆင်ခြင်ကြည့်စေချင်လို့ပါ။ မိမိတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း/အုပ်စုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မိမိတို့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကံသုံးပါးကသာ တက်စေ၊ ကျစေနိုင်တာကို မြင်ကြစေချင်လို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောတာကို လက်ခံရမယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ကျွန်တော် ပြောတာ ယထာဘူတ ကျမကျ၊ ဆောင်သင့် မဆောင်သင့် မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်များနဲ့ ချင့်ချိန်ဆတွက်တော်မူကြပါခင်ဗျား။
(၀၀၁၆ နာရီ ၁၉၁၀၁၀)
မှတ်ချက်။ ။ သည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆရာမ ပန်ဒိုရာက ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးရင်း မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သူရေးထားတဲ့ ပို့(စ်) လင့်(ခ်)ကိုပါ ပေးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူရေးတာ ဖတ်ပြီး တော်တော် သဘောကျသွားပါတယ်။ http://pandora-and-pandora.blogspot.com/2008/11/blog-post_29.html မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်)နှစ်ခုစလုံးမှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေထဲက ကျွန်တော် မပိုင်ဘဲ အင်တာနက်ထဲကနေ ဆယ်နှစ်တာအတွင်း စုထားခဲ့သမျှ ပုံအားလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော့် Facebook မှာရော၊ ဘလော့(ဂ်)မှာပါ ဦးဘုန်း (ဓာတု)ရဲ့ စာကို တင်ခွင့်ပြုဖို့ ဆရာ ဦးဘုန်း (ဓာတု)ဆီက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တယ်လီဖုန်းနဲ့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ပြီးမှ တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author lettwebawPosted on 19 October 2010 19 October 2010 Categories Discussion, Thoughts4 Comments on You may copy and paste my writings, but…
Author lettwebawPosted on 15 October 2010 18 October 2010 Categories Reproduction4 Comments on After You by U Hpone (Datu)
ကျွန်တော့်မှာ ရောဂါဆန်းတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒါက တယ်လီဖုန်း မုန်းတဲ့ ရောဂါပါ။ အမုန်းဆုံးက ပါလေရာဖုန်းပါပဲ။ မရှိမကောင်း ရှိမကောင်းထဲမှာ သင်းက ထိပ်ဆုံးက ပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်က ပါလေရာဖုန်းကို သိပ်ကိုင်ခဲတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး မကိုင်ဘူး။ မလွှဲသာတဲ့အခါမှ ကိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း တော်တော်တန်တန်လူကို ပေးခဲတယ်။ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းသူတိုင်းလိုလိုကို အိမ်ဖုန်းနံပါတ်သာ ပေးဖြစ်တာချည်းပဲ။ ကျွန်တော့်ကို အလုပ်အပ်မယ့်သူ (ဝါ) ပိုက်ဆံ စို့စို့ပို့ပို့ ပေးမယ့်သူလောက်ပဲ အဲဒီ့ပါလေရာဖုန်းနံပါတ်ကို အသိခံတာ များတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်ကတောင် လွှတ်အရေးမကြီးရင် အဲဒီ့ ဖုန်းကို မဆက်ဘူး။
ဒါကို ပြောနေရတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ တစ်နေ့သောအခါ ကျွန်တော် သင်တန်းတစ်ခု ကိုင်နေရာက ခဏ နားနေချိန်မှာ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ပါလေရာဖုန်းက ထမြည်တယ်။ ကျွန်တော် မုန်းတာက ဖြစ်ပြီ။ ပိုက်ဆံပေးမယ့်လူဆိုရင်တော့ သည်းခံလိုက်မဟဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်တဲ့အခါ မဟုတ်ဘူး၊ ပိုက်ဆံပေးမယ့်သူ မဟုတ်ဘူး။ နာမည်ကြီး အပတ်စဉ် ဂျာနယ်တစ်စောင်က သူငယ်မလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်လာတာပါ။
စိတ်ချဉ်က စပေါက်ပါပြီ။ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ကျွန်တော့် ပါလေရာ ဖုန်းနံပါတ်ကို သိနေရတာလဲလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ သူ့အယ်ဒီတာမင်း၊ ကျွန်တော့် တပည့်ဟောင်းကို အဲဒီ့ဖုန်းနံပါတ် ပေးထားဖူးတာ သတိရသွားတယ်။ သင်းလက်ချက်ပဲ နေမှာပါ။
(အိမ်ပြန်ရောက်လို့ အကြောင်းစုံ သိရတော့ ပိုဆိုးသွားပါတယ်။ အစက အိမ်ကို ဆက်တာတဲ့။ ကျွန်တော် မရှိတော့ ပါလေရာ ဖုန်းနံပါတ် တောင်းသတဲ့။ ကျွန်တော့်အိမ်ကလည်း ကျွန်တော် မအားတဲ့အကြောင်း၊ သင်တန်းတစ်ခု ကိုင်နေလို့ ဖုန်းဆက်လို့ မရကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် နံပါတ် မပေးနိုင်ကြောင်း ကျကျနန ရှင်းပြလိုက်သေးတယ်ဆိုပဲ။ သည်ကြားထဲကမှ ဖုန်းနံပါတ်ကို မရအရ ရှာဆက်တဲ့သူတို့ရဲ့ “တစ်ဖို့တည်း ကြည့်တတ်တဲ့” စိတ်ဓာတ်ကို ဩချရတော့မှာပါ။)
ကိစ္စက ကျွန်တော့်ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချင်လို့တဲ့။ သူတို့ ဂျာနယ်ရဲ့ အထူးထုတ် အချပ်ပိုကဏ္ဍမှာ ထည့်ချင်လို့ဆိုပဲ။ အမယ်… တောင်းတဲ့ အချိန်ကိုလည်း ကြည့်ဦး။ အခုညနေ တွေ့ပါရစေတဲ့။ သူ ဖုန်းဆက်တဲ့ အချိန်က နေ့ခင်း ၃ နာရီ ထိုးခါတောင် နီးနေပြီ။ ညနေ တွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ နောက်ထပ် ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက်နေရင် တွေ့ချင်တာ။ တော်တော် လွယ်ပါလား။
ကျွန်တော် ယတိပြတ် ငြင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြောလည်း ပြောဖြစ်လိုက်တယ်။ မင်းတို့ ဂျာနယ်က ကျုပ်ကို အိမ်သာလို သဘောထားတာမို့လို့ မတွေ့နိုင်ဘူးလို့။
မှန်ပါတယ်။ အဲဒီ့ဂျာနယ်က ကျွန်တော့်ကို လုပ်ပေါင်းများနေပြီ။ အင်တာလာ ဗျူးတယ်။ ရေးပြီး ပုံမနှိပ်ခင် ကျွန်တော့်ကို လာပြပါ့မယ်၊ ဂျာနယ်ထွက်ရင်လည်း လာပေးပါ့မယ်တို့ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောတတ်ကြတယ်။ ပြီးရင်တော့ ပေါ်မလာ ဇာတ်ကား ရိုက်စမြဲပဲ။
အဲဒါကိုလည်း ဖုန်းဆက်တဲ့ ကလေးမလေးကို ပြောပြလိုက်တယ်။
“လိုချင်ရင်တော့ ညည်းတို့က ရွှန်းရွှန်းဝေလို့… ပြီးရင်တော့ လှည့်ကို မကြည့်တတ်ကြတာမို့ ညည်းတို့ ဂျာနယ်ဆို ကျုပ် မတွေ့နိုင်ဘူး”လို့ပါပဲ။
“အဲဒါ သမီးမှ မဟုတ်တာ…”
မှန်တာပေါ့။ သိပ်မှန်တာပေါ့။ အဲဒီ့စကားကြောင့် ကျွန်တော် သည်စာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
သူ့ရှေ့က လူတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို သူ အခု ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ လုပ်တာကတော့ ကျွန်တော့်အိမ်က သေချာ ပြောထားပါလျက်ကနဲ့ ကျွန်တော့် ပါလေရာဖုန်းကို မရမက လှမ်းဆက်တာ၊ အမှန်းကမ်းလမ်း မသိစွာ နာရီပိုင်းပဲ ခြားပြီး တွေ့ခွင့်တောင်းတာရယ်တို့ပါပဲ။ သူ့လုပ်ရပ်ရယ်၊ သူ့ရှေ့က သူ့ဂျာနယ် နာမည်ခံပြီး ဆုံခဲ့ရဖူးသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ရယ် နှစ်ခု ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် အတော် ခါးသီးသွားပါတယ်။
သူ့ရှေ့က လူတွေဟာ ရိုးရိုး လူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရာ ဂျာနယ် နာမည်တပ်ပြီးတော့ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခါမှာ လူပုဂ္ဂိုလ် ငဖြူ၊ ငမည်းကို ကျွန်တော် မှတ်မနေ အားပါဘူး။ ဂျာနယ်ကိုသာ မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
လူတိုင်းလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ နေမှာပါ။ ရင်ဘတ်မှာ နာမည် ချိတ်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်က ဝန်ထမ်းပင်ဖြစ်စေဦးတော့၊ လူထက် သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ကိုသာ မှတ်မိနေပြီး အဲဒီ့ဆိုင်က ဝယ်လို့ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး၊ ချေငံတယ်၊ မချေငံဘူးလို့သာ မှတ်ထားကြမှာ သူသူငါငါပါပဲ။
အခုကလေးမလေးလည်း သူ့ရှေ့က အစဉ်အဆက် လုပ်လာကြသမျှရဲ့ ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူ လုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် သူတာဝန် ထမ်းဆောင်ရာ ဂျာနယ်တိုက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကျွန်တော့်ဆီ လာခဲ့ဖူးတဲ့ ဝန်ထမ်း သုံး-လေးယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် သူ့ဂျာနယ်ဆိုရင် သည်အပေါက်ပဲ လာမှာလို့ ကျွန်တော် တစ်ထစ်ချ တွက်ဆလိုက်ပါပြီ။
ပြောခဲ့တဲ့ အယ်ဒီတာမင်း ကျွန်တော့်တပည့်လည်း အတူတူပါပဲ။ လိုချင်တာ ရှိတဲ့အခါ ရှေးတုန်းက ဆရာတပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကို ဇာချဲ့ပြီး သွားဖြီးလေးနဲ့ ရောက်လာ၊ ဆရာ့စာတွေကို ဘယ်လိုဖတ်တာ၊ ဆရာ့စာတွေက သူ့ဘဝအတွက် ဘယ်လို အကျိုးရှိတာတွေကို ရွှန်းရွှန်းဝေ ပြောပါတယ်။ လိုချင်တာ ယူပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော့်ဆီကို မာကြောင်း၊ သာကြောင်း ဓာတ်ချောစာလေးတောင် မပို့တော့ပါဘူး။ စုပ်စမြုပ်စ ပျောက်သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ဟာ သတင်းသမားအတုဘဝမှာ ၁၅ နှစ်လောက် နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ သတင်းသမားမဟုတ်ပေမယ့် သတင်းအလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ သည်အခါမှာ သတင်းရင်းမြစ်တွေကို အမြဲတစေ ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ သတင်းရနိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိသူများမို့ အဆက်အသွယ် မပြတ်အောင် ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံထားရပါတယ်။
မလိုရင် ပစ်ထားပြီး လိုတော့မှ သွားတောင်းရင် တစ်ခါက နှစ်ခါပဲ ရပါမယ်။ သုံးခါလောက်ကျရင်တော့ မျက်ထောင့်နီလာပါလိမ့်မယ်။ လေးခါ ဆိုရင်တော့ ခေါင်းရမ်းမှာက သေချာသလောက်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သတင်းသမားဟာ အဆက်အသွယ်တွေကို မပြတ် ထိန်းသိမ်းထားရပါတယ်။ ဒါ သတင်းလောကရဲ့ အထာပါ။
ယုတ်စွအဆုံး ယမကာတိုက်ကျွေးတဲ့ ဧည့်ခံပွဲမျိုးဆိုရင်တောင် သတင်းသမားက မူးလို့ မရပါဘူး။ ဧည့်ခံပွဲထဲမှာ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေကို ဖွေရှာရတယ်၊ မွန်းမံရတယ်။ အရင်းအမြစ် အသစ်တွေကိုလည်း မုဆိုး ကျားချောင်းသလို အနံ့ခံလိုက်ရပါတယ်။ သတင်းသမားအတွက် အလုပ်ချိန် အကန့်အသတ် မရှိဘူး။ ၂၄ နာရီလုံးဟာ သတင်းသမားရဲ့ အလုပ်ချိန်ပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဲဒီ့ ၁၅ နှစ်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ၃၆ နာရီလောက် မနားတမ်း၊ လုံးလုံး မအိပ်ဘဲ သတင်းနောက် လိုက်ခဲ့ရတာမျိုးတွေ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ် ရှိဖူးတယ်။
ဒါပေမယ့် သတင်းသမားက အကင်းပါးရတယ်။ အလိုက်ကမ်းဆိုး သိရတယ်။ ကိုယ့်ကို ကြည်ဖြူအောင် နေရတယ်။ သူနဲ့သူ သင့်ရာလေးတွေလည်း ကိုယ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးရတယ်။ လာဘ်ထိုးတာ မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်အရေးကြီးတဲ့ အဆက်အသွယ်တွေကိုဆိုရင် သတိတရနဲ့ ဝယ်ခြမ်းသွားတာလေးတွေ လုပ်ပေးရတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ဆီက ဘာသတင်းမှ ရစရာ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပိုတောင် လုပ်ထိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်လိုချင်မှ သွားပေးရင် ကိုယ့်စေတနာက မူမမှန်ဘူး။ ဘာမှ မလိုအပ်ချိန်မှာ ပေးထားတော့ ကိုယ့်ကို သူမျက်နှာ နာနေပြီ။ ကိုယ်မတောင်းတောင် သူက ပေးချင်နေပြီ။ အဲလိုဖြစ်အောင် အားထုတ်ရတယ်။ ကြိုးစားရပါတယ်။
သတင်းသမား အချင်းချင်းဆိုလည်း အလားတူပဲ ဆက်ဆံရပါတယ်။ ဒါကျတော့ ကိုယ့်ဘက်က သူ့ကို သတင်းဦး သတင်းထူးကို ပြန်ပေးသင့်တဲ့အခါလည်း ပေးရတာမျိုးပါ။ ကိုယ်က သတင်းထူးတိုင်း သူ့ကို ပေးထားရင် သူကလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်ပေးလာမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ တစ်ခုတော့ ရှိသပေါ့။ ကိုယ်က သတင်းထူး လိုက်ရတဲ့ သတင်းသမားဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စာစောင်အတွက် အရင် ရေးစရာရှိတာရေး၊ ပို့စရာ ရှိတာပို့ပြီးမှ ပေးတန်တာ ပေးရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေကျတော့ ကိုယ်ရတဲ့ သတင်း အရင်းအမြစ်က မခိုင်လုံဘူး။ အတည်ပြုဖို့ လိုနေတယ်။ သတင်းသမားချင်း ပလဲနံပသင့်နေရင် အဲဒါ သိပ်အဆင်ပြေတယ်။ သူ့သတင်း ကိုယ့်သတင်း တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင် အဖြေက ထွက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းများတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဖြစ်နေဖို့က သတင်းသမားချင်း အဆက်အသွယ်ကိုလည်း ထာဝရ မွမ်းမံနေရတယ်။ ထိန်းသိမ်းနေရပါတယ်။
ကျွန်တော်က သတင်းပညာ တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းသမားအဘိုးကြီးတွေနဲ့ သိခွင့်ကြုံရတယ်။ အများစုက သက်ရှိ ထင်ရှားတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ သတင်းဘိုးအေကြီးတွေလို့ပဲ ဆိုပါစို့ရဲ့။ သူတို့ဆီက တိုက်ရိုက် သင်ယူရတာလည်း ရှိတယ်၊ သွယ်ဝိုက် သင်ယူရတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ့အတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်တော့်အတွက် ဝမ်းစာတွေပါပဲ။
အခုကာလမှာ ဂျာနယ်တွေ အပြိုင်းအရိုင်းပေါ်ထွန်းလာတာ အားရစရာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ဂျာနယ်တွေကသတင်းလိုက်သူ၊ သတင်းရေးသူ အများစုကတော့ ချာတူးတွေဖြစ်နေတာ ကိုယ်တိုင် ခဏခဏကြုံရတယ်။ သူတို့က သတင်းအရင်းအမြစ်ကို အိမ်သာလိုပဲ သဘောထားနေကြတယ်။ သူတို့ အသုံးလိုတဲ့အခါ မျက်နှာလိုအားရ လုပ်လိုက်ကြ၊ အသုံးမလိုတဲ့အခါ ကျ လှည့်တောင် မကြည့်ကြနဲ့၊ တော်တော့်ကို အော့နှလုံးနာစရာ ကောင်းနေတယ်။ အထူးသဖြင့် နာမည်ရှိတဲ့၊ စောင်ရေကောင်းတဲ့ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေဆို သာဆိုးသေးတယ်။ အဲဒီ့အရှိန်အဝါကို သုံးပြီး ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းက လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ တရားသေ မှတ်ထားကြတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာ ကိုယ်ကိုယ်စားပြုရာ စာစောင်ကိုသာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေမှန်းလည်း မသိရှာကြဘူး။
သတင်းအရင်းအမြစ်ကို မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်းလည်း မသိဘူး။ လိုချင်ရင်တော့ ပျာပျာ ပျာပျာနဲ့ ပေါ်လာကြစမြဲ။
ကလေးမလေးက ပြောသေးတယ်။ “ဆရာက တော်တော် ရက်စက်တာပဲ”တဲ့။ ဟား… သူက ကျွန်တော့်ကို တံဆိပ်ကပ်၊ အကဲဖြတ်တဲ့ စကားပြောသွားတာပါပဲ။ သူက စကားလှအောင် ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်က “ရှင်တော်တော် ရိုင်းတာပဲ”လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
“အေး… ရက်စက်တယ်ကွာ”လို့ ပြောပြီး ကျွန်တော် ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့ကစပြီး အဲဒီ့တယ်လီဖုန်းကိုလည်း ကျွန်တော် လုံးဝ မကိုင်တော့ပါဘူး။
ဟုတ်တယ်… ကျွန်တော် လုပ်လို့ရတာဆိုလို့ ဒါ ရှိတော့တာပဲ။ သည် စာနယ်ဇင်းလောကကြီးထဲက ငါးခုံးမတွေကို ကျွန်တော် လိုက်ဖမ်းနေလို့ ရမှာမှ မဟုတ်တာပဲဗျာ… နော…
(ရန်ကုန် – ၁၀ဝ၉၁၀)
(၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။)
Author lettwebawPosted on 11 October 2010 18 October 2010 Categories Recounts, Reproduction6 Comments on Flies in the Ointment
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက် တုန်းက တင်ထားခဲ့တဲ့ City FM နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အသံဖိုင်တွေ အပြည့်အစုံ ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။ အဲတုန်းက ဘလော့(ဂ်)ဆိုတာကို စမ်းလုပ်ခါစ မလည်မ၀ယ်နဲ့မို့ အသံ ဘယ်လို တင်ရမှန်း မသိလို့ မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ sound cloud ကျေးဇူးနဲ့ တင်လို့ ရသွားပါတယ်။
ကျွန်တော့် လေက ရှည်တာမို့ အဲဒီ့အင်တာဗျူးကို ထုတ်လွှင့်စဉ်က နှစ်ပတ်ခွဲပြီး တင်ဆက်ခဲ့ရသလို တစ်ခါလွှင့်ရင်လည်း နှစ်ပိုင်း ခွဲပြီး တင်ဆက်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ့အတွက် အသံဖိုင်ကလည်း လေးပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ပိုင်းစီကို သက်ဆိုင်ရာ စာများရဲ့ အဆုံးတွေမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စကား ဆုံးတဲ့ နေရာမှာ အသံဖိုင်တစ်ခုစီ ထည့်သွင်းပေးထားတာပါပဲ။
မေးတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ နာမည်က “သင်းဝတ်ရည်အောင်”ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အသံသွင်းတုန်းက အစီအစဉ်တာဝန်ခံက ကိုနိုင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ စီစဉ်တာပါ။ ကလေးမလေးကလည်း သွက်လက်ချက်ချာသလို ကိုနိုင်ကျော်တို့ အဖွဲ့ကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးခဲ့တာမို့ အဲဒီ့ အမေးအဖြေတွေ ရုပ်လုံးကြွနေခဲ့တာပါ။
အခုတော့ ကိုနိုင်ကျော်ကြီးတစ်ယောက် City FM မှာ မရှိရှာတော့ပါဘူး။ အဲဒီ့ကနေ စလုံးကို ရောက်၊ စလုံးကနေ အခု ရန်ကုန်က ရုပ်သံဌာနတစ်ခုမှ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့သာ ကြားသိရပါတယ်။ “သင်းဝတ်ရည်အောင်”ရဲ့ အသံကိုတော့ ယနေ့ထက်တိုင် City FM မှာ ကြားနေရဆဲပါပဲ။
ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရက်စွဲတွေတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အသံသွင်းခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့က ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါလည်း သိပ်တော့ အထင်မကြီးပါနဲ့၊ အဲတုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံမှာ ပါနေတဲ့ နေ့စွဲကို ကြည့်ပြီး ပြောတာပါခင်ဗျား။) သည် ပို့(စ်)မှာ အသံသွင်းစဉ်က ကိုနိုင်ကျော်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို တင်ဆက်ထားသလို အင်တာဗျူးစာမျက်နှာမှာလည်း သင်းဝတ်ရည်အောင်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံကိုပါ တင်ထားပါကြောင်း။
သြော်… အဲဒီ့ကို သွားချင်ရင် သည်စာမျက်နှာ ခေါင်းစီးထိပ်က Interview with City FM ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရမှာဖြစ်သလို အခု ပို့(စ်)မှာ ပေါ်နေတဲ့ အဲဒီ့စာတန်းလေးကို နှိပ်လိုက်ရင်လည်း သွားလို့ ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on5October 20105October 2010 Categories Information1 Comment on Sound Files Added
On Discrimination 2: Sound File
အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဆီက လာတဲ့ စာတစ်စောင်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဆွေးနွေးထာတာလေး တစ်ခုပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ လ ၉ လ လောက်က Mandalay FM မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာလေးကို ပြန်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Author lettwebawPosted on4October 20104October 2010 Categories FM Broadcasts, Reproduction, Thoughts6 Comments on On Discrimination 2: Sound File
Many Years with My Old Flame
စန္ဒယားချစ်ဆွေ မကွယ်လွန်မီ အသက် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲမှာ စာရေးသူတွေက ဆရာချစ်ဆွေရဲ့ သီချင်းများနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုသီဆိုခဲ့စဉ်က သီဆို အသံသွင်းခဲ့တာလေးပါ။ စာနဲ့တင် နှိပ်စက်ရတာ အားမရလို့ အသံနဲ့ ရော၊ ရုပ်နဲ့ပါ နှိပ်စက်လိုက်တယ်လို့ မှတ်ယူတော် မူကြပါကုန်။ 😀
Author lettwebawPosted on2October 2010 30 March 2012 Categories Sound File5 Comments on Many Years with My Old Flame